▼ 2012 (1538)
▼ Nov4- Nov 11 (89)
ဂေါပကအဖွဲ့က ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်လို့ ဒေါ်စု လေယာဉ်စီးလုံ...
ကားဟောင်းတစ်စီး ပေးလျှင် ကားသစ်တစ်စီးရမည့် အစီအစဉ်...
"ကုလားဟူသည် ဤသို့တည်း... အပိုင်း(၂)"
ဒေါ်စု ဓနုဖြူခရီးစဉ်က ပြဿနာဟာ NLD နဲ့နိုင်ငံရေးသမား...
လက်မှတ်မထိုးပဲ ကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကိစ...
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ရေးခဲ့သော ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ် (စီး...
မြိတ်မြို့ရှိ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒေ...
ငါ့အဖေ ဘယ်သူလဲ သိလား လို့မေးတဲံ့ခေတ်ကုန်သွားပြီ.။အ...
အွန်လိုင်းမှာ မိန်းကလေးပုံတွေကို မဟုတ်တရုတ်လုပ်.ဗု...
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြော...
မြန်မာနိုင်ငံကို ဥရောပလေကြောင်းလိုင်း ပထမဦးဆုံးအြ...
မြိတ်မြို့ ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ထောက်ခံ...
နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာပါလို့ပြောပြီး ဘင်္ဂလီတွေ ပွါးမျ...
သံရုံး ၉ ရုံးပေါင်းစည်းပြီး ရခိုင်အရေးအတွက် ကြေငြာ...
မြန်မာပြည်လာမည့် အိုဘားမားနှင့် အင်တာဗျူး
ခင်မောင်တိုး ကျမ္မာရေး အခြေအနေ တိုးတတ်လာပြီ
" ကုလားဟူသည် ဤသို့တည်း- အပိုင်း(၁)"
ဆီရထားတွဲ တိမ်းမှောက်ရာမှ ဆီများ ဒေသခံများ လုယက်ခပ...
အစိုးရ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ တွင် K...
KIA ရင်း ၆ တပ်တွေ ကားလမ်းပ်ါတတ် အေးဓါးပြ တိုက်ကုန်ြ...
အတွင်းသိတွေ ဖေါက်ချလိုက်တဲ့ အုတ်ခဲကျိုးဇော်ကြီး (...
ုမြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် Miss.နန်းခင်ဇေယျာ ၏ ပရိသတ်များနှ...
တောင်ကိုရီးယားတွင် နျူဓာတ်ပေါင်းဖိုနှစ်လုံး ပိတ်သိ...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နျူစွမ်းအင်သုံး လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ယူအက်စ...
အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး မသေဆုံးသေး ၊ မျှော်လင့်ချက်ရ...
အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး ဆုံးရှာပြီ
ပြည်ပမှ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ လေးခုအား...
ဘင်္ဂလီများလက်မှတ်မထိုးပဲ ကန်လန့်တိုက်နေသဖြင့် လ၀က မ...
“ မီဒီယာသမားဟူသည် အခွင့်ထူးခံလူတန်းစားများ(လုံးဝ) ...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပဲဆီပုံး အတွင်း ဝှက်ယူလာသော ကျောက...
တောင်သာမြို့နယ် ကျောက်ကာ ကျေးရွာတွင် NLDပါတီမှ ရုံ...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းရေး ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကို စုံစ...
အမေရိကန်-ဂျပန် ပူးပေါင်း စစ်ရေး လေ့ကျင့်
ဘင်္ဂလီ ၉၀ ကျော်ပါ လှေတစီး ကော့သောင်းမှ ပင်လယ်ပြင်သိ...
ဟိုတယ် ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ကျင်းပပေးနြေ...
အကြည်တော် သရော်လိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်သမီးပျိုများ...
တပ်မတော်သား ပြည်သူလွှတ်တော်နှင့်တိုင်းဒေသကြိး ကိုယ်...
ကင်မရာများ တပ်ဆင်၍ စည်းကမ်းပျက်ယာဉ်များအား အရေးယူေ...
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူလယ်သမား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပ...
မြန်မာ-တရုတ်ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းဆိုင်ရာ တိကျသော ...
အဘွားတို့ အတွက် ခြင်ထောင်တွေ စောင်တွေ လိုနေတယ် သား...
နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော် ဒီဖြိုး မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့အတ...
၁၆ နှစ်အရွှယ် မိန်းကလေး နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေပါသဖြင့်...
တာချီလိတ်မြို့ တွင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ငါးသိန်း...
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် NLD တွေမှာလည်း ဗဟိုကို မကျေနပ်မ...
ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ထောက်ခံြေ...
နေပြည်တော်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်တွင် ဗြိတိန်န...
အာဆီယံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးများ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည်
မြန်မာ့နိင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ လေ...
ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်အတွင်း ခိုးဝင်ခြင်း အလွဲသုံးစာြး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကုလားကိုကုလားလို့မခေါ်ရ စကားနှင...
အန်တီစုပြောတဲ့ သူမ၏ အဘေး ဗိုလ်မင်းရောင်နှင့် ဗိုလ...
ကလေးငယ်တစ်ဦး တောခွေးများ ဝိုင်းဝန်း ကိုက်ခဲမှုကြော...
ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ...
လုံခြုံရေး စိတ်မချ၍ တာချီလိတ်ခရီးစဉ် သက်ဆင် ဖျက်သိ...
အစိုးရဝန်ထမ်း သင်တန်းသား ၅ဝဝ ကို နှစ်စဉ် အိန္ဒိယခေါ်...
စင်ကာပူမှာ PASSPORT စာအုပ်တအုပ် ကောက်ရထားပါသောကြော...
ရခိုင်ပြည်တယ်အရေးကဲသို့ မဖြစ်ပွားစေရန် မြ၀တီမြို့ရ...
စီအိုင်အေတို့ သူလျှိုကြောင် တစ်ကောင်အတွက် ဒေါ်လာ သန...
၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဥပဒေအတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရ...
ကျော်စွာလင်း (မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်)သိစေရန်နှင့် သူနာပြ...
ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်တဲ့ ငွေကြေးစစ်ပွဲသစ်လား
ဆဒန်ဟူစိန်၏ စစ်ချီတေးမှာ Whitney Huston ၏ I will a...
ပိတောက်ပင် ရေနံမှော်၌ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ချပ်သင်းဘေးမဲ့တောတွင် မုဆိုးများလက်ချက်ကြောင့် မြန...
ကုလား လို့ပဲ ဆက်၍ ခေါ်မည် အမီနာ
အားဖြည့်အချိုရည်သောက်ပြီး သေဆုံးသွားသည့်အတွက် အချိ...
ကျောက်ဖြူမြို့မှ ကောလဟလ တစ်ခုကို ဖြေရှင်းခြင်း
ဟန်းဆက် ၅၀၀၀ တန် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် နောက်တစ်မျိုးပြင်...
မူဆလင်ဘာသာကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းပြီး သားကိုရှ...
လက်အရသာခံခြင်းတဲ့ Android ကိုကိုများအတွက်(မမများအတ...
ကေအိုင်အေကို တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြရင်ပြ.မပြရင် စစ်တပ်က...
ဆမ်ဆောင်းဂလက်စီမီနီဟန်းဆက် ကျပ် ၅၀၀၀ နှင့် မရောင်း...
တာချီလိတ်မြို့ ဆန်ဆိုင်းရပ်ကွက်တွင် အာပီဂျီ ဗုံးသီ...
ဂေါပကအဖွဲ့က ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်လို့ ဒေါ်စု လေယာဉ်စီးလုံးငှားဖို့ ရန်ပုံငွေရှာပေးနေရတဲ့ NLD မုန့်ဟင်းခါးသည်များက ဂေါပကတွေကို တရားစွဲ
သရက်ခရိုင် ၊ အောင်လံမြို့ သိမ်ကုန်းဓမ္မာရုံ ဘုရားပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)ပါတီ ရန်ပုံငွေအဖြစ် ဈေးရောင်းချရာတွင် NLDပါတီ ဆိုင်းဘုတ်အား ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့က ဖြုတ်ချခဲ့သည့် အတွက် NLDပါတီက တရားစွဲဆိုလိုက်ကြောင်း ယင်းမြို့နယ် တရားရုံးထံမှ သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၃ဝရက်နေ့တွင် အောင်လံ NLD ပါတီဝင်များ မုန့်ဟင်းခါးနှင့် ပါတီဝတ်စုံများ ရောင်းချနေစဉ် ဂေါပက အဖွဲ့များကဆိုင်းဘုတ်များကို ဖြုတ်ချခဲ့ခြင်းကြောင့် ချက်ပြုတ်ထားသော မုန့်များ မရောင်းရဘဲ ဆုံးရှုံးရခြင်း တို့ကြောင့် အောင်လံမြို့ NLD ပါတီညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်နောင်ထွန်း က တရားလို ပြုလုပ်၍ တရားရုံး ဦးတိုက် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ကားဟောင်းတစ်စီး ပေးလျှင် ကားသစ်တစ်စီးရမည့် အစီအစဉ် မကြာမီ စတင်မည်
အပ်နှံရမည့် ကားဟောင်း တစ်စီးပေးပြီး ကားသစ်တစ်စီး လဲလှယ်ရယူနိုင်မည့် အစီအစဉ်အား နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စတင်ကာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟု Farmar Auto Showroom မှ ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာစိုးထွန်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ''ကမ္ဘာပေါ်မှာတောင် မရှိသေးတဲ့ အခွင့်အရေးပါ။ ကားသစ်ဖိုး၊ သင်္ဘောတင်ခ၊ လိုင်စင်လျှောက်ခ၊ အကောက်ခွန်၊ ကုန်သွယ်ခွန်၊ ကညနခွန်နှင့် အခြားခွန်၊ ယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံစရိတ်နှင့် ကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်ခတွေ အားလုံး Free of charge (အခမဲ့)ပါ။ အရေအတွက်တော့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်'' ဟု ၄င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။
အပ်နှံရမည့်ကားနှင့် လဲလှယ်ခွင့်ရမည့် ကားမော်ဒယ်များမှာ ၂ဝဝ၂ မှ ၂ဝဝ၆ အတွင်းရှိ မော်ဒယ်မြင့် ဂျပန်ကားများဖြစ်ပြီး လဲလှယ်ရယူနိုင်မည့် ကားအမျိုးအစားများမှာ Suzuki Light Truck ကားများ၊ Daihatsu အမျိုးအစားကားများ၊ Mazada Bongo Truck ကားများ၊ Nissan March အမျိုးအစား ကားများဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်မှ စတင်၍ လဲလှယ်ရယူနိုင်မည်ဟု သိရသည်။ ''ကားတင်သွင်းခွင့် ပြုလိုက်ကတည်းက ရောင်းအားနဲ့ ဝယ်အားမှာ ရောင်းအားက over supply ဖြစ်နေပြီး ဝယ်လိုအား demand နဲ့မမျှဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ဈေးလျော့ကုန်တာပေါ့။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကားသွင်းသူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ငယ်တွေ အရှုံးပိုတာပေါ့''ဟု ၄င်းကဆက်လက် ပြောပြသည်။
လက်ရှိအပ်ကား 'ဗ' အက္ခရာ နံပါတ် ပေါက်ဈေးသည် သိန်း ၉ဝ အထက်တွင်ရှိပြီး အပ်ကား 'န' နှင့် 'ပ' အက္ခရာများမှာ သိန်း ၇ဝ မှ ၇၃ သိန်းခန့် အထိ ရှိသည်ဟု သိရသည်။ အပ်ကားများ ဈေးမြင့်တက်လာသောကြောင့် ကားသစ်များ ဈေးအနည်းငယ် မြင့်တက်လာကြောင်း ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဈေးကွက်အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်ဟု ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
အခန်း(၄) ထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းအား သုံးစွဲပုံ ဥပမာများ
(1) မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
၁၉၄၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့၊ လုပ်ကြံခြင်းမခံရခင် ၆ရက်အလိုတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နောက်ဆုံးပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ လက်ဖွာမှုများ၊ဖြုန်းတီးမှုများကို ထောက်ပြသွားပြီး အဆိုပါစရိုက်များကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက် ပြည်ပတင်သွင်းကုန်အရေအတွက်ကို လျှော့ချသင့်သည်ဟု ပြောကြားသည့်နေရာတွင် ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းအား ဤသို့သုံးစွဲခဲ့သည်။
အကယ်၍ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် တစ်စုံတစ်ရာအား ထိခိုက်စေသည့် ဆိုးရွားသောအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှုမျိုး ရှိနေခဲ့လျှင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေဖြင့် အဆိုပါစကားလုံးအား သူ၏မိန့်ခွန်းအတွင်း ထည့်သွင်းပြောကြားလိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
(2) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု
Burma under the Japanese အမည်ဖြင့် J. S. Furnival ဘာသာပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့သည့် ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနု မြန်မာဘာသာဖြင့် မူရင်းရေးသားသော ငါးနှစ်ရာသီ ဗမာပြည် စာအုပ် စာမျက်နှာ ၁၇ တွင်-
“ကန်ထရိုက်တာကုလားသည် သူ၏အလုပ်ကို ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ မန္တလေးမှ ထွက်ပြေးခြင်းဖြစ်လေသည်။”
“အုပ်ချုပ်ရေးစီရင်မှုအဖွဲ့ (preparatory Committee) ကိုဖွဲ့ပြီး၍ တစ်လလောက်ရှိသောအခါ တစ်နေ့သ၌ လက္ခဏာဖတ်တတ်သော ကုလားနာမည်ကြီးတစ်ဦးကို သူ၏ရုံးခန်းအတွင်း၌ ဒေါက်တာဘမော်သည် ခေါ်၍ (သူသည် ချောင်း၍ အသတ်ခံရမည်လောဟူ၍) တိုင်ပင်ဘူး၏။”
(3) ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ သတင်းစာဆရာ၊စာရေးဆရာ ဦးသိန်းဖေမြင့်
သူ၏ထင်ရှားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည့် ဘုံဝါဒနှင့်တို့ဗမာ စာအုပ် စာမျက်နှာ၁၇၀ တွင်-
“ကုလားဆင်းရဲသားများကား ဗမာပြည်၌လာရောက်နေထိုင်ရသော ကျေးဇူးကိုမေ့ဟန်မရှိ။ ဗမာများကို ရန်မမူ၊ တခါတခါ ဗမာများနှင့် ဆိုးတူကောင်းဘက် ဆောင်ရွက်ကြလေသည်။ ရေနံချောင်း၊တညင်စသော ရေနံမြေသပိတ်တို့၌၎င်း၊ အခြားသပိတ်တို့၌၎င်း၊ ကုလားအလုပ်သမားနှင့် ဗမာအလုပ်သမားသည် တပူးတပေါင်းတည်းရှိသည်မှာ ထင်ရှား၏။”
အခန်း(၅) အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများမှ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းအား သုံးစွဲပုံဥပမာများ
(1) ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ကြေငြာစာတမ်း အမှတ်(၁)၊ အပိုဒ်(၂)၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဏ)၊ ၁၉၄၄-ခု၊သြဂုတ်လ ၇ ရက်။(3)
“ကရင်၊ရှမ်း၊ပလောင်၊တောင်သူ၊ကချင်၊ချင်း၊ မွန်၊တရုပ်၊ကုလား စသောလူနည်းစုများ၏ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုဆက်ဆံရေးအခွင့်အရေးများကို အစိုးရက အထူးစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း။”
(2) မြေအောက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကြေငြာချက်၊ ၁၉၄၅-ခု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ရက်။ အခဏ်း (၆)၊ အပိုဒ် (၄)။(4)
“ကုလားစစ်တပ်ကိစ္စ။ ကုလားစစ်တပ်သည် ဂျပန်စစ်တပ်နှင့်အတူ ဆုတ်ချင်လည်းဆုတ်သွားမည်၊ သို့မဟုတ် ဗမာပြည်တွင် ဖရိုဖရဲဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်သွားလိမ့်မည်၊ ကုလားစစ်တပ် ဖရိုဖရဲဖြစ်ခဲ့လျှင် ဗမာပြည်တွင် အဓိကရုဏ်းများ ဖြစ်နိုင်စရာလမ်းရှိသည်၊ ဖြစ်နိုင်ပါလျှင် ဂျပန်ကို တော်လှန်တိုက်ခိုက်ရေးတွင် ကုလားစစ်တပ်သည် ငါတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍လုပ်သည်အထိ ကြိုးစားကြရမည်။”
အခန်း(၆) မှားယွင်းစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း
(က) အစွန်းရောက်အမျိူးသားရေးဝါဒီများ၏ ဖန်တီးမှု
ကိုလိုနီခေတ်အတွင်း အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြောင်းရွေ့အခြေချနေထိုင်သူဦးရေ အလွန်အမင်းများပြားလာသည့်ကြောင့် အဆိုပါ အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့က ကုလားဟူသောဝေါဟာရအား အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုသစ်တစ်ရပ် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့က ကုလားဟူသော ဝေါဟာရသည် “ကူး”(ဖြတ်သန်းခြင်း)ဟူသော မြန်မာဘာသာစကားနှင့် “လာ”(၀င်ရောက်ခြင်း) ဟူသောမြန်မာစကားမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အပြည့်အစုံ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါက ပင်လယ်ရပ်ခြားတိုင်းတပါးမှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာသူများ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အဆိုပါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အဆိုးသဘော အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မပါရှိပဲ မြန်မာမှုပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်ထိ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များမှ အဆိုပါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်း ဓလေ့သုံးစကားအဖြစ် စွဲမြဲစွာသုံးစွဲလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် အဆိုပါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ပညာရှင်ရပ်ဝန်းအတွင်း လုံးဝအခြေခံသုံးစွဲခြင်းမရှိသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အထက်ပါအချက်အလက်သည် မှန်ကန်မည်ဆိုပါလျှင် မူလဘူတ အာရပ်ဘာသာစကား Kafir (Non Believer of Islam)မှ ဆင်းသက်လာသော အာဖရိကလူမည်းများကို မြန်မာဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုသည့် ကပ္ပလီ ဟူသော အသုံးအနှုန်းအား အထက်ပါအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်စေလိုပါသည်။ရလာဒ်အနေဖြင့် “ကပ်”(အနားသို့တိုးသည်၊အနီးတွင်နေသည်) နှင့် “ပလီ”(ချွဲသည်[ဘန်းစကား]၊ ချိုသာစွာဖြားယောင်းသည်) ဟူ၍ ဆက်စပ်မှုမရှိသော အဓိပ္ပါယ်များ ထွက်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။ ထိုနှစ်ခုအား ဆက်စပ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည် ဆိုပါက “ကပ္ပလီ” ဟူသော အခေါ်အဝေါ်သည် အနီးတွင်နေ၍ ချွဲသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်နေပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ကုလားဟူသော ဝေါဟာရသည် “ကူးလာ” မှဆင်းသက်လာကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် မှားယွင်းသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။
ဤနေရာ၌ Col. Henry Yule နှင့် A. C. Burnel တို့ရေးသားသော Hobson-Jobson စာအုပ်, စာမျက်နှာ 495 တွင်ဖော်ပြထားသည်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
Kula, Kla, n.p Burmese name ofanative of Continental India; and hence misapplied also to the English and other Westerns who have come from India to Burma; in fact used generally foraWestern foreigner.
ကုလား(ကုလ) နာမ်/နာမ်စား- အိန္ဒိယတိုက်သားများအား ခေါ်ဝေါ်သည့် မြန်မာအမည်။ ထို့အပြင် အိန္ဒိယမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င်ရောက်လာသော အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနှင့် အခြားအနောက်တိုင်းသားများကို ခေါ်ဆိုသည်။ အတိအကျအနေဖြင့် အနောက်ဖက်မှ နိုင်ငံခြားသားများအား ယေဘုယျခေါ်ဝေါ်သည်။
ဤအခေါ်အဝေါ်၏ မူလဇစ်မြစ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငြင်းခုန်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က ၎င်းအခေါ်အဝေါ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မျိုးနွယ်စုအမည်တစ်ခုဖြစ်သော “Kols” နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ တချို့ကမူ “ကလင်္ဂ” နှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုဆိုကြပြီး တချို့က အိန္ဒိယ၏ လူမျိုးဇာတ်ခွဲခြားမှုနှင့် ဆက်နွယ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မြန်မာဘာသာစကားနယ်ပယ်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံယုံကြည်ထားသည်မှာ ပင်လယ်ရပ်ခြား တိုင်းတပါးမှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာသူများဟု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် “ကူးလာ” မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟူသော အချက်ဖြစ်နေသည်။ ကုလားဟူသောစကားလုံး၏ မူလပုံသဏ္ဍာန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိကျသည့် သမိုင်းကြောင်းအထောက်အထားများကို ပထမဆုံးခြေရာခံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ရှေးဟောင်းသုတေသနပါမောက္ခ Dr.Forschammer ၏အဆိုအရ သက္ကတဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသည့် ရှေးဟောင်းပဲခူးကျောက်စာများတွင် ကုလားဟူသော ယနေ့ခေတ်အခေါ်အဝေါ်သည် သက္ကတဘာသာစကား “ဂိုလ” မှဆင်းသက်လာပြီး အဆိုပါစကားလုံးသည် သက္ကတဘာသာစကားအရ Gauda ဒေသ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် လူသိများသည့် ဘင်္ဂလားမြောက်ပိုင်း Gaur နယ်မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်လာသော အိန္ဒိယလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို ရည်ညွှန်းကြောင်း သိရှိရသည်။
14th cent, - "The heroes Sona and Uttara were sent to Ramaña, which formsapart of Suvannabhumi, to propagate the holy faith ........ This town is called to this day Gola mattikanagara, because of the many houses it contained made of earth in the fashion of houses of the Gola people." – Inscr. at Kalayani near Pegu, in Forschammer, ii.(5).
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများမှ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုဖန်တီးခြင်း
ကုလားဟူသော အခေါ်အဝေါ်သည် တစ်ဖက်သားအား ထိခိုက်စော်ကားသည့် အဓိပ္ပါယ်မျိုးမသက်ရောက်သော်လည်း အိန္ဒိယနွယ်ဖွားများမှာ အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်အား နှစ်သက်ခြင်း မရှိကြချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကုလားဟူသောအခေါ်အဝေါ်သည် အိန္ဒိယဘာသာစကားများဖြစ်သော ဟင်ဒီ၊အူရဒူ၊ဘင်္ဂလီစသည့် ဘာသာစကားများတွင် အသားအရောင် (သို့) အသားမဲ ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သီးခြားအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ကြသော အိန္ဒိယ၊ပါကစ္စတန်နှင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများသည် ကုလားဟူသော အခေါ်အဝေါ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် အဆိုပါအသုံးအနှုန်းသည် ဗမာ၊ရခိုင်၊မွန်စသည့် ဌာနေလူမျိုးများက ၎င်းတို့အား အသားမဲများဟု(၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း)နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံသည့် အသုံးအနှုန်းအဖြစ် ခံစားရကြောင်း ညည်းငြူပြောဆိုလေ့ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ထိုအချက်ကို နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်များ၊ သတင်းထောက်များနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ကုလားဟူသော အခေါ်အဝေါ်အား သုံးစွဲသည့်နေရာတွင် ဗမာ၊ရခိုင်၊မွန်၊ရှမ်း၊ကရင်စသည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအနေဖြင့် အထက်ပါအဓိပ္ပါယ်မျိုးအား မည်သည့်အခါမှ ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ တိတိကျကျထောက်ပြရမည်ဆိုပါလျှင် အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းနှင့် ပါကစ္စတန်ဒေသမှ ဆင်းသက်လာသော တချို့လူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ မွန်၊ဗမာ၊ရခိုင်စသည့် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတချို့ထက် အသားပိုဖြူပြီး ချောမောလှပသည်ကို ကြည့်လျှင်သိရှိနိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြသည့် အိန္ဒိယနွယ်ဖွားလူမျိုးများထဲမှ စိတ်သဘောထားမပြည့်ဝဘဲ ၎င်းတို့၏မူရင်းဒေသမှ စရိုက်လက္ခဏာများကို တင်းကြပ်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီး ဒေသခံလူနေမှုစနစ်တွင် ပျော်ဝင်ရောနှောမှုမရှိသော လွန်ကဲစွာအဖြစ်သည်းသူတစ်စု၏ တုန့်ပြန်မှု သက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုသာ မှန်ကန်ခဲ့မည်ဆိုပါလျှင် ဘာသာစကားနယ်ပယ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အသုံးအနှုန်းများသည်လည်း အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာနိုင်သည်။
(1) မြန်မာဝေါဟာရတွင် Chinese များကို တရုတ်(ယပက်လက်သံ)ဟု ခေါ်ကြသည်။အဆိုပါဝေါဟာရအား အထက်ပါနည်းအတိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်လျှင် “တ” ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် မြန်မာဘာသာစကားတွင် တစ်ဟူသော ဂဏန်းကို “စ်” ဖျောက်၍ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရုတ်(သို့)အသံထွက်-“ယုတ်” သည် မြန်မာဘာသာစကားတွင် ကောက်ကျစ်သော၊ စိတ်ထားသိမ်ဖျင်းသော စသည့် ဆိုးရွားသောအဓိပ္ပါယ်များစွာ ရှိနေသည်။ အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဆက်စပ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုကြည့်လျှင် Chinese များသည် မြန်မာဘာသာစကားတွင် ကောက်ကျစ်သိမ်ဖျင်းသော လူတစ်မျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေပေလိမ့်မည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ Chinese နွယ်ဖွားများသည် အဆိုပါဝေါဟာရသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခါမျှ စောဒကမတက်ကြသည့်အပြင် “တရုတ်” ဟူသောလူမျိုးအမည်ကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ခံယူကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
(2) မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ထိုင်းလူမျိုးများက ၎င်းတို့၏ဘာသာစကားအရ Phama ဟုခေါ်ကြသည်။ အဆိုပါစကားလုံး၏ အသံထွက်သည် မြန်မာဝေါဟာရထဲတွင် “ဖာမ” (Whore) သို့မဟုတ် “ဖားမ”(Female Frog) ဟု လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် မည်သည့်မြန်မာလူမျိုးမျှ အဆိုပါအခေါ်အဝေါ်အတွက် စောဒကတက်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ [ထိုင်းလူမျိုးများအနေဖြင့် ဘုရင့်နောင်မင်းတရား ထိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်အချိန်တွင် မြန်မာတို့အား Phama ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သကဲ့သို့ ယခုမြန်မာလူမျိုးအများအပြား ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အောက်ခြေသိမ်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသည့် အချိန်တွင်လည်း Phama ဟုသာ ဆက်လက် ခေါ်ဝေါ်နေမည်သာဖြစ်သည်။ ]
အခန်း(၇) ပညာရှင်တချို့၏ ဒေသခံများထံမှ ပါးစပ်ရာဇ၀င်များကို ကိုးကား၍ (သတိမမူပဲ) ရေးသားတင်ပြမှုများ
"Burmans call Indians Kalas. This term has been interpreted into two different ways. Ku in Burmese means to cross over; and la is to come. So Kala is the one who has crossed over and come into the country, that is,aforeigner. The other interpretation is that it is the Sanskrit Kula meaning clan or caste. Hence it is thought that the term was applied to Indians since they observe caste. Kalas therefore would mean "the caste people". Most probably the first interpretation is the correct one. Kala simply meansaforeigner. Europeans are often called by Burmans Kala phyu, i.e. white foreigners. The term Kala has indeed become in Burmaaterm of reproach and should be banned. When the Japanese were in occupation of the country from 1942 to 1945, they forbade the use of this term, substituting Indos ."
“မြန်မာလူမျိုးများသည် အိန္ဒိယလူမျိုးများကို ကုလားဟုခေါ်ကြသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအား နည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ “Ku” သည် မြန်မာစကားတွင် ဖြတ်သန်းခြင်း၊ “La” သည် ဆိုက်ရောက်သည် ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကုလားဟူသော စကားသည် တိုင်းပြည်တွင်းသို့ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာသူ၊ နိုင်ငံခြားသားဟု အနက်အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အခြားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနည်းတစ်ခုမှာ သက္ကတဘာသာစကားအရ ကုလား၏ အဓိပ္ပါယ်သည် လူမျိုးစု(သို့) ဇာတ်ခွဲထားသော၊သီးသန့်ခွဲခြားထားသော လူတစ်စုဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအသုံးအနှုန်းသည် အိန္ဒိယလူမျိုးများအား ၎င်းတို့ကို ဇာတ်မတူသော သီးသန့်လူမျိုးစုအဖြစ် ရှုမြင်ချိန်မှစတင်၍ သက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ထင်မှတ်ရသည်။ ထိုအချက်ကိုထောက်ရှု၍ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ဇာတ်မတူသောလူမျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ရပေလိမ့်မည်။ အထက်ပါအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှစ်ခုထဲမှ ပထမတစ်ခုမှာ တိကျမှုအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။ ကုလားသည် နိုင်ငံခြားသားကို ရည်စူးခေါ်ဆိုသည့် ရိုးရိုးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ဥရောပတိုက်သားအချို့ကိုလည်း မြန်မာများက ကုလားဖြူဟု မကြာခဏခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည်။(ဥပမာ-အသားဖြူနိုင်ငံခြားသား) ကုလားဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် မြန်မာပြည်တွင် တဖက်သားအား ရှုံ့ချစော်ကားစရာစကားတစ်ခု မလွဲမသွေဖြစ်လာပြီး လုံးဝကန့်သတ်ပိတ်ပင်သင့်သော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုတိုင်းပြည်အား ဂျပန်များသိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် ၁၉၄၂-၁၉၄၅ တွင် ၎င်းတို့က အဆိုပါအသုံးအနှုန်းကို တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး အင်ဒို ဟူသောစကားဖြင့် အစားထိုးခေါ်ဝေါ်စေခဲ့သည်။”
အထက်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် မူရင်းအတိုင်း တင်ပြထားသော ပါမောက္ခ Desai ၏ တင်ပြချက်တွင် မျဉ်းသားထားသော စာကြောင်းသည် တိကျမှန်ကန်မှုမရှိချေ။ အဆိုပါဝေဖန်ချက်အတွက် အထောက်အထား၊ အကိုးအကားအဖြစ် ဂျပန်ခေတ်(၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော မြန်မာသတင်းစာများမှ ကောက်နုတ်ချက်အချို့ကို ဥပမာအဖြစ် ထုတ်နုတ်တင်ပြလိုပါသည်။ အဆိုပါသတင်းစာကောက်နုတ်ချက်များကို လူထုဦးလှ၏ “သတင်းစာများက ပြောပြတဲ့ စစ်အတွင်း ဗမာပြည်” ဒုတိယတွဲ၊ စာမျက်နှာ ၁၉၊၄၆၊၉၂၊၁၈၆၊ ၂၉၂၊၃၀၈ စသည်တို့တွင်လည်း လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သည်။
(က) မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်၊ ၁၉၄၂၊ ကြာသပတေးနေ့
“နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့ နေ့လည်၁နာရီအချိန်တွင် ကုန်စည်ကြီးကြပ်ရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ကျင်းပရာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ၊တရုတ်၊ ကုလား ကုန်သည်ကြီးများ၊ ပွဲစားကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း။”
(ခ) ဗမာ့ခေတ်သတင်းစာ၊ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊၁၉၄၂၊ တနင်္ဂနွေနေ့
“တရုတ်ကပြား၊ ကုလားကပြားများမှာ ဗမာများနှင့် နေရာတိုင်းမှာလိုလို ၀င်ဆန့်နိုင်စေကာမူ အင်္ဂလိပ်ကပြားတို့မှာ ခွဲခွဲခြားခြားနေတတ်၏။”
(ဂ) ဗမာ့ခေတ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။( ၀န်ကြီး သခင်ဗစိန်၏ မိန့်ခွန်း)
“ဗမာပိုင်၊ကုလားပိုင် အစရှိတဲ့ သင်္ဘောတွေကို သည်ဌာနက သွားလာနိုင်ဖို့ အမိန့်တွေထုတ်ပေးမယ်”
အကယ်၍ ဂျပန်ခေတ်တွင် ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းအား ပိတ်ပင်၍ အင်ဒိုဟူသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် အစားထိုးခဲ့လျှင်(ပါမောက္ခ Desai ၏အဆိုအရ) အဆိုပါသတင်းစာများ၌ သတင်းရေးသားဖော်ပြရာတွင် ကုလားဟူသော စကားလုံးနေရာတွင် အင်ဒိုဟုအစားထိုးရုံမှလွဲ၍ တခြားနည်းလမ်းမရှိချေ။ ထိုသို့မဟုတ်လျှင် အဆိုပါသတင်းစာတိုက်များမှ အယ်ဒီတာများနှင့် သတင်းထောက်များသည် ဂျပန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ကင်ပေတိုင်များ၏ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ကုလား P> vulg Inder m; Mann m aus dem Westen
Dr.Asche ၏အဆိုအရ ကုလားဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ပါဠိစကားမှဆင်းသက်လာပြီး အနောက်အရပ်မှလူ(သို့) အိန္ဒိယလူမျိုးဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်းနှင့် အဆိုပါအသုံးအနှုန်းသည် ရိုင်းစိုင်းသော စကားဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ဦးနုနှင့် ဦးသိန်းဖေမြင့်တို့၏ ကုလားဟူသောအမည်ကို ထည့်သွင်းသုံးနှုန်းပုံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Dr.Asche ၏ အဘိဓာန်ပါ ကောက်ချက်ဆွဲမှုအရ အဆိုပါအဘိဓာန်ကိုဖတ်ရှုသူများအမြင်၌ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသုံးဦးသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားသူများဖြစ်နေသည့်အပြင် အိန္ဒိယလူမျိုးများကို အဆိုးမြင်စိတ်ဓာတ်ရှိသည့် လူများဖြစ်သွားပေတော့မည်။(6) ပကတိအမှန်တရားတွင်မူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ၎င်းအားဆက်ခံသူ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုသည် မဟတ္တမ ဂန္ဒီ၊နေရူး၊ မိုဟာမက်အလီဂျင်းနားကဲ့သို့သော အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်များနှင့် အလွန်ရင်းနှီးသူများဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်များအပေါ် လေးစားသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ကွန်မြူနစ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးသိန်းဖေမြင့်သည်လည်း အိန္ဒိယကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အလွန်နီးစပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ထိုပါတီမှရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့် အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်သည်။
ခိုင်မာသော စာပေအထောက်အထားများအရ “ကုလား” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်မှ လူမျိုးများကိုခေါ်ဆိုသည့် စကားလုံးဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် တဖက်သားအား ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် အဓိပ္ပါယ်မပါရှိချေ။ အဆိုပါ စကားလုံးအား လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသည်မှာ ကိုလိုနီခေတ်ကာလအတွင်း၌သာဖြစ်ပြီး အယူသည်းသော အိန္ဒိယလူမျိုးများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသကဲ့သို့ ဌာနေလူမျိုးများထဲမှ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတချို့မှ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုအသစ် တီထွင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှု လွဲမှားခြင်းသည် ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် မြန်မာစာပေပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲ ခိုင်မာသော မြန်မာစာပေလက်ရာများကို တိတိကျကျ လေ့လာကိုးကားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည့် နိုင်ငံခြားသား ပညာရှင်များ၊ လေ့လာသူများမှတဆင့် ချဲ့ကားပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
စာရေးသူအနေဖြင့် ဤစာတမ်းသည် အဆင့်အတန်းမြင့်မားသော မြန်မာ့ဂန္တ၀င်စာပေအများစုကို လေ့လာရန် လက်လှမ်းမမှီကြသည့် မြန်မာစာပေလေ့လာသူ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် သီးသန့်ရည်စူး၍ မြန်မာ့စာပေလေ့လာမှုနယ်ပယ်အတွင်း အလွန်တရာသေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် စေတနာအပြည့်ဖြင့် အားထုတ်ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
1 U Tin Htway, "Trash from Treasure, In the Case of Judson's Burmese English Dictionary", in "Tradition and Modernity in Myanmar", The International Conference on Myanmar, Berlin, 1993.
6 Dr.Annemarie Esche သည် Mr.Jens Lorenz ၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း စာတမ်းပြုစုသည့်နေရာတွင် Chief supervisor နှင့်အတိုင်ပင်ခံပညာရှင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ Dr.Asche နှင့် Jens Lorenz တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းများကို မြန်မာဘာသာမှ ဂျာမန်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ကွန်မြူနစ်တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိန်းဖေမြင့်သည် ၁၉၆၂-၆၆/၁၉၇၅-၇၉ ခုနှစ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဂျာမနီသံရုံး၏ ပထမဆုံးအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သော Dr.Otto Esche နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ Dr.A.Esche တို့၏ အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လာခဲ့သည်။ Dr.A.Esche ၏ အထက်ဖော်ပြပါ အဘိဓာန်တွင် ဦးသိန်းဖေမြင့်၏ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်ကြည်အား အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အံ့သြသင့်စရာတစ်ခုမှာ Dr.A.Esche သည် ဒေါ်ခင်ကြည်ကြည်ထံမှ မည်သို့သော အချက်အလက်၊အထောက်အထားများ ရရှိခဲ့ပါသနည်း ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ သူမ၏စာအုပ်ရှိ အမှာစာထဲတွင် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာရှင်များ(သို့) စာပေအထောက်အထားများ မပါရှိချေ။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အချက်တစ်ခုမှာ သူမအနေဖြင့် ဤအဘိဓာန်ကိုပြုစုရန်အတွက် ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အား ရန်ကုန်မြို့ရှိ အိန္ဒိယလူမျိုးများထံမှ လွယ်လင့်တကူရရှိခြင်း (သို့) ကြားဖူးနားဝပညာရှင်အချို့ထံမှ ရရှိခြင်းသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
U Khin Maung Saw(Berlin)၏ (Mis)Interpretations of Burmese Words:Part I.In the case of the term Kala (Kula) သုတေသနစာတမ်းအား တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ လိုအပ်ချက်များ၊မှားယွင်းမှုများရှိမည်ဆိုပါက ဘာသာပြန်ဆိုသူတွင်သာ တာဝန်ရှိကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 9:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = သုတကဏ္ဍ
ဒေါ်စု ဓနုဖြူခရီးစဉ်က ပြဿနာဟာ NLD နဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေ အကွက်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး အရင်အစိုးရစနက်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်း ဓနုဖြူရှင်းတမ်း ဟု ဖြေရှင်းပြီ(စစ်ဗိုလ်(Captain)လေး)
၁၁.၁၀.၂၀၁၂ နေ့စဉ်ထုတ် HotNews ဂျာနယ်ပါ “အောင်မြင်သူ” သို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ အဆက်(သို့) ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဓနုဖြူရှင်းတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးအောင်သင်း စာပေဟာပြောပွဲတစ်ခုမှာ ပြောခဲ့သလို အနာဂတ်ကို သစ္စာမဖေါက်တဲ့အတွက် အတိတ်က ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ရေးသွားပါ့မယ်။
ဓနုဖြူဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးနှောင်းလူတို့ အမှတ်မမှားစေလိုတဲ့ စိတ်ရင်းနဲ့ပါ၊ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသူများ အနေနဲ့ မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။။ အဲဒီအချိန် ၁၉၈၉ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမတ်လကုန် ဧပြီလဆန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ မ.ဝတ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေး(ကွယ်လွန်)နဲ့ အတွင်းရေးမှုးက စာရေးသူပါ။(စာရိုက်သူမဟုတ်ပါ) ၁၉၉၀ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက် ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ်အသီးသီးကို NLD အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှည့်လည်ကွင်းဆင်းရင်း ဓနုဖြူ ရောက်ရှိပြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓနုဖြူလာမယ့်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး NLD ဥက္ကဌ ဦးထွန်းရှင်(ခ)ဦးပါကြီး၊ဒုဥက္ကဌဦးသောင်းရီ(ရှေ့နေ) အတွင်းရေးမှူး ကိုကျော်ကြီးတို့နဲ့ မ.ဝ.တ ရုံးမှာ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံညှိနိုင်းကြပါတယ်။
ပညာတတ်တတ်ရန်မလို.တွေးခေါ်တတ်ရန်မလို.ဒေါ်စုကို လက်ချင်းချိတ် ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေဝေ လုပ်တတ်ရန်သာလိုသည်
မြို့တွင်းဝင်ရောက်မယ့် လမ်းကြောင်း စုဝေးဟောပြောမယ့်နေရာ၊ နယ်ကျေးရွာတွေကို သွားမယ့် သင်္ဘောဆိပ်၊ ပြန်ဝင်မယ့် သင်္ဘောဆိပ် နောက်ဆုံးမြို့ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားမယ့် လမ်းကြောင်းကအစ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ သဘောတူညီပြီးအချက်တွေကို သူတို့လည်း သူတို့ အထက် အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့် ကျွန်တော်တို့လည်း ကျွန်တော်တို့ အထက်ခရိုင်(မြို့နယ်စု) တိုင်း အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီး လုံခြုံရေးစီမံချက်တွေ ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ လုံခြုံရေးစီမံချက်ဆိုတာဟာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် လုံခြုံရေးက အဓိကပါ။
လမ်းပေါ်မှာ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပြီး မလိုလားအပ်တဲ့ အဖျက်အမှောင့်တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာမှာကို မ.ဝ.တ အနေနဲ့ အစိုးရိမ်ဆုံးပါ။ မှန်ရာပြောရင်သစ္စာပါ။ ဘာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမှာ မရှိပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်ကနေ အမြန်ဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာ သွားစေချင်တာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ပါ။
လုံခြုံရေးစီမံချက်အရ ညောင်တုန်းမြို့နယ်နှင့် ဓနုဖြူမြို့နယ်အစပ် စက္ကော-ဓနုဖြူ ကားလမ်းပေါ်က ထော်ကလို့ဆိုတဲ့ ရွာလေးမှစပြီး မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ဓနုဖြူ၊ ဓနုဖြူမှ ကမ်းကမ်းငူကြီး၊ ဆကာကြီးစတဲ့ ကျေးရွာများသို့ ရေယာဉ်ဖြင့် အဲဒီရွာများက ပြန်လာပြီး ဓနုဖြူကနေပြန်လည်ထွက်ခွာသည်အထိ အနီးကပ်လုံခြုံရေးက ဥက္ကဌ(ဗိုလ်မှုးတင်ဖေအေး)ဗိုလ်မှူးမောင်ထွန်း ခ.မ.ရ(၁၀၈)ဦးတင်စိန်(ရဲမြို့နယ်မှူး)တို့က ဆောင်ရွက်ပြီး ကျွန်တော်က ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မဟုတ်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးရုံး(မဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ ရတနာသီရိလမ်းထောင့်)မှာ တာဝန်ယူရတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အဖွဲ့များ နံနက်ပိုင်းမှာ မော်တော်ယာဉ်တန်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာပြီး ဓနုဖြူမြို့နယ် NLDရုံးစိုက်ရာ မဟာဗန္ဓုလလမ်းက ဦးကျော်မင်းအိမ်မှာ စုဝေးဟောပြောကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဓနုဖြူမြို့နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးပေါ်က ကမ်းငူကြီး၊ ဆကာကြီး စတဲ့ ကျေးရွာများကို ရေလမ်းခရီးအတိုင်း ကြိုတင်ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကြားသင်္ဘောဆိပ်(မ.ဝ.တရုံးအနီး) ကနေ သွားကြတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်ကနေ ဓနုဖြူကို ပြန်ဝင်ရင်လည်း ကြားသင်္ဘောဆိပ်ကပဲ ပြန်ဝင်ရမှာပါ။ အသွားမှာ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ မရှိခဲ့သော်လည်း အပြန်ခရီးစဉ်မှာတော့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားတဲ့ ကြားသေင်္ဘာဆိပ်ကနေ ကမ်းပေါ်မတက်ဘဲ ပိတောက်ပင်ဆိပ်(မြို့မ ဓမ္မာရုံထိပ်)ကနေ လူစုလူဝေးနဲ့ ဓနုဖြူမြို့မဈေးကို ဖြတ်ပြီး လာတာကြောင့် အဲဒီမှာ ပြဿနာစဖြစ်တာပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ စာဖတ်သူ ပြည်သူများကို နည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်။ အမှန်တကယ် သူတို့ဝင်ရောက်ရမယ့် ကြားသင်္ဘောဆိပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ရဲ့ တောင်ဘက် သူတို့မြို့နယ်ရုံးတွေ ရဲစခန်းတွေ ရှိတဲ့နေရာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု အပြည့်ရှိတယ်။ တကယ်တမ်း ဝင်လာတာက မြောက်ဘက်က NLD မြို့နယ်ရုံးနဲ့လည်း အများကြီးဒေတယ်။ ဈေးအလယ်ကဖြတ်လာတာ။
စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်မှာ ပါလာသူတွေ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်တွေနဲ့ ရောထွေးသွားတယ်။ လုံခြုံရေးအရ မဖြစ်သင့်ဘူး။ ကြိုတင် ညှိနှိုင်းထားတဲ့ လမ်းကြောင်းလည်း မဟုတ်တဲ့အတွက် တာဝန်အရ တားဟယ်၊ ဆီးဟယ်၊ ပစ်မယ်၊ ခတ်မယ်၊ ဖြစ်ကြတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဒါပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗိုလ်မှူး တင်ဖေအေးနဲ့ ဗိုလ်မှုးမောင်ထွန်းတို့ ရောက်လာပြီး ဆက်မလုပ်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို တားမြစ်ခဲ့တယ်။ (ဆရာအောင်မြင်သူရေးသလို ဒါစစ်မြေပြင်မဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေး ဂဠုန်ဦးစောလို မဖြစ်စေချင်ဘူး ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေ မပြောခဲ့ဘူးဆိုတာကတော့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေတဲ့ ဗိုလ်မှူးမောင်ထွန်းကိုသာ မေးကြည့်ပါ)
ဓနုဖြူဈေးအတွင်းလမ်းကလေးက ပေ၂၀လောက်ပဲ ကျယ်ပါတယ်။ လမ်းဘေးဆင်းလျောက်စရာ ဘာပလက်ဖေါင်းမှလဲမရှိ၊ လမ်းအရှည်ကလည်း မြောက်ဘက်ထိပ်ကနေ ဆက်သွယ်ရေးရုံးထောင့်အထိ ပေ၁၀၀၀လောက်ပဲ ရှည်ပါတယ်။ လူစုလူဝေးက ဈေးတစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ ပေ၅၀၀ထက် ပိုမဝေးတော့ပါဘူး။ တကယ်သာသွေးဆာနေခဲ့ရင် စာဖတ်သူအနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး န.တ.ခ(ပုသိမ်)မှာ ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အထက်မှပေးအပ်သော အမိန့်နဲ့တာဝန် ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ၁၂ရက်တိတိ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ အကယ်၍သာ ဗိုလ်မှူးတင်ဖေအေးနှင့် ဗိုလ်မှူးမောင်ထွန်းတို့ ဝင်မတားဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အထိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ဒါဆို မင်းက တကယ်ပစ်မှာလား” လို့ စာဖတ်သူများ သိချင်နေပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော် တကယ်ပစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် စစ်မြေပြင်မှာ ရန်သူကိုချေမှုန်းသလို ပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မတော်က သင်ပေးထားတဲ့ လုပ်နည်းစနစ်(procedure)အတိုင်း လူစုလူဝေး ကွဲသွားအောင် လူအုပ်ကိုကျော်ပြီး ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်မှာပါ။ လူစုမကွဲသေးရင်လည်း နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟု ယူဆရသူ(သို့) အလံကိုင်ထားသူအား အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေသောနည်း ခါးအောက်ပိုင်းကိုသာ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်ရမှာပါ။ အဲသလိုပစ်ခတ်ရတဲ့ အဆင့်အထိရောက်ခဲ့ရင်လည်း အများပြည်သူစိုးရိမ်သလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထိမှန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဝန်းရံ့ထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ပင်နီတိုက်ပုံဝတ် လူကယ်လေးတွေကိုသာ ထိခိုက်မှာပါ။
ပစ်မယ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သေနှတ်ပြောင်းဖျားတွေကို ဖယ်ရှားပြီးသွားခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကလည်း အနီးကပ်ဆုံးဓါတ်တိုင်တွေကို ဖေါ်ပြပြီး စည်းသုံးတန်သတ်မှတ်ကြောင်း အသံချဲ့စက်နဲ့ကြေညာပါတယ်။ လူစုလူဝေးကြီးကလည်း ဒုတိယလိုင်းလောက် အရောက်မှာ ရပ်တန့်နေတယ်။ အဲဒီအချိန် ဗိုလ်မှူးနှစ်ယောက်က လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကို တားမြစ်ဖယ်ရှားပြီးမှ လူစုလူဝေးကြီးက လုံခြုံရေးအဖွဲ့ကို ကျော်ဖြတ်သွားတာပါ။ ဝါးခမောက်ကြီးဆောင်းထားတဲ့ ဒေါ်စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)နဲ့ Colonel Kyi Mg(ဦးကြည်မောင်) တို့ကိုတော့ လူစုလူဝေးရှေ့မှာ သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:30 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, သုတကဏ္ဍ
လက်မှတ်မထိုးပဲ ကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကိစ္စကို ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းနှင့် ရခိုင်ဝန်ကြီး ပေါက်တောသို့ လာရောက် ဖြေရှင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို့နယ်မှ ဘင်္ဂလီ-မွတ်ဆလင် ကျေးရွာ ၅ရွာမှ ကျေးရွာသားများကို နိုင်ငံသား ဟုတ် မဟုတ် စိစစ် နေရာ ရှုပ်ထွေမှုများပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့် ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်တို့ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့က ပေါက်တောမြို့နယ်သို့ လာရောက် ဖြေရှင်း ပေးခဲ့သည် ဟုသတင်းရရှိသည်။
ပေါက်တောမြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ဦးတက်ထွန်းအောင်က ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းနှင့် အဖွဲ့ ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်တက်မော်ရွာသို့ ရောက်ရှိလာကြောင်းကို ယခုလို ပြောကြားသည်။
“ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရေးအတွက် နိုင်ငံသားကဒ်တွေကို စိစစ်နေတဲ့ နေရာမှာ အရင်က ထုတ်ပေးထားတဲ့ ယာယီ ကဒ်ပြားမှာ လူမျိုး ဘင်္ဂလီ လို့ရေးသားထားတာကို ခုရိုဟင်ဂျာ နာမည် ရေးမှ လက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုပြီး တောင်းဆိုနေ ကြတဲ့အတွက် တော်တော် ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖို့ မနေ့က ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်တက်မော်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်းနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်တို့ အဖွဲ့ ရောက်လာပါတယ်။ သူတို့က ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းနဲ့ ညွှန်ကြားသွားမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး” ဟုပြောသည်။
ပေါက်တောမြို့နယ်ရှိ မွတ်ဆလင် ကျေးရွာ ၅ ရွာကို အဖွဲ့ ၁၅ ဖွဲ့ ခွဲပြီး ကျေးရွာများတွင် စခန်းချကာ လူဦးရေ စာရင်း နှင့် နိုင်ငံသား ကဒ်ပြားများကို စစ်ဆေးနေသည်ဟု သိရသည်။ ထိုသို့ စစ်ဆေးနေစဉ် ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဟု ရေးသားထားသဖြင့် လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆန် နေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ဘင်္ဂလီတွေဘက်က လက်မှတ်ထိုးဖို့ ငြင်းဆန်တဲ့ ကိစ္စကဒီလိုပါ။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုခေတ်က ကျွန်တော်တို့ကို ရိုဟင်ဂျာ အမည်နဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်။ ပြီးရင်မြန်မာ့ အသံလွှင့်ဌာနကလည်း ထုတ်လွှင့်ခွင့် ပြုခဲ့တယ်။ အဲဒီ အထောက် အထားနဲ့ ငြင်းဆန်းနေတာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
၎င်းပြင်သူက “ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကတောင်မှ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိဘူးလို့ အတိအလင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန် ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့က ဒီဟာကြီးကို မရမက တောင်းဆိုနေတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ” ဟုပြောသည်။
ဘင်္ဂလီတွေ လက်မှတ်မထိုးလို့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ
ပြည်ပမှ သွေးထိုးကြိုးကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိသည့်အတွက် သူတို့ လူမျိုးအတွင်းမှာ တနေ့ တမျိုး တနေ့ တမျိုး ပြောင်းလဲမှုများတွေ တွေ့ရကြောင်း ဦးတက်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
နိုဝင်ဘာ ၉ရက်နေ့ မှ စတင်ပြီး ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးနှင့် မဖြစ်ရေးကို စစ်ဆေးနေရာ လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်နေသဖြင့် အချိန်နှင့် တပြေးညီ လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ယခုစစ်ဆေးနေသည့် ကျေးရွာများမှာ ဆင်တမော်၊ ကြိမ်နီပြင်၊ ငှက်ချောင်း(ပုဏ္ဏားကြီး)၊ ဆည်သုံးတန်(င၀က် ချောင်း)၊ ပြိုင်းတောင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
အဖွဲ့ ၁၅ဖွဲ့ခွဲပြီး စစ်ဆေးရာတွင် တဖွဲ့ တစ်ခုတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၅ဦးပါပြီး ထိုအထဲတွင် ရခိုင်မှတဦးနှင့် မွတ်ဆလင်များ ဘက်မှ တစ်ဦးစီ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 7:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ရေးခဲ့သော ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ် (စီးဆင်းနေသော ဧရာဝတီ)
စစ်ဆေးရုံ ကားဂိတ်သို့ အမှတ် (၉) ကား ထိုးရပ် လိုက်ချိန်တွင် ညနေ ၃ နာရီ၊ ၄၅ မိနစ်သာရှိသေးသည်။ လူနာ တွေ့ချိန်သည် ညနေ ၄ နာရီမှ ၆ နာရီ အထိဖြစ်၍ ၁၅ မိနစ် စောင့်ရပေဦးမည်။ အမှတ် (၂) ဂိတ်ပေါက်ဝရှိ အုတ်ခုံတန်း ပေါ်တွင်ထိုင်ရင်း ထောက်ကြန့်ကား ဂိတ်က ဝယ်လာခဲ့သည့် ၃၅ ပြားတန် ဒူးယား စီးကရက် တစ်လိပ်ကို အင်္ကျီအိတ် ကပ် အတွင်းမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ မီး ညှိရန်အတွက် ဘေး ဘယ်၊ ညာသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တွင် အုတ်ခုံအစွန်း၌ ဆေးလိပ် ထိုင်သောက်နေသည့် ဦးကြီး တစ်ဦးကို တွေ့၍ အနီးသို့ တိုးကပ်လိုက် မိသည်။
"ဦးလေး ... မီးတစ်တို့လောက် နော်"
ဦးလေးကြီး ကမ်းပေးသည့် မီး တရဲရဲနှင့် ဆေးလိပ်ကို လှမ်းယူကာ မီးညှိရင်း ဦးလေးကြီးကို အကဲခတ်သလို
ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်မိသည်။ အသား ညိုညို၊ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် တုတ်တုတ် ခိုင်ခိုင်နှင့် ခေါင်းတုံး ဆံတောက်ကို တိုတို ညှပ်ထားသည်။ ဦးလေးကြီး၏ ပုံသဏ္ဌာန် ကိုမြင်လိုက် ကတည်းက စစ်သည်
ဟောင်းကြီး တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော် အကဲခတ် မိသည်။ သေသပ်စွာ ဝတ်ဆင် ထားသည့် ပင်နီတိုက်ပုံ၏ ညာဘက်အိတ် ကပ်ထက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အဝါ၊ အနီ၊ အစိမ်း သုံးရောင်ခြယ်ကတ္တီပါ အတုံးကလေးထက်မှ တဖျပ်ဖျပ်တောက် နေသည့် ငွေကြယ်ဖြူကလေးသုံးပွင့်ကို လှမ်း၍မြင်လိုက်ရသည်နှင့် ထိုဦးလေး ကြီးကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားသွားမိ သည်။
"ဦးလေးက မော်ကွန်းဝင် ပထမ ဆင့်နော်"
ဦးလေးကြီးသည် ကျွန်တော် ကမ်းပေးသည့် ဆေးလိပ်ကို လှမ်းယူရင်း ကျွန်တော့် မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ကာ ဖော်ရွေစွာ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။
"ဟုတ်တယ်ကွဲ့ ငါ့တူရဲ့၊ ငါ့တူ က တပ်ထဲကပဲလား"
"ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် တပ်မ ( -) ဌာနချုပ်ကပါ။ ကျွန်တော့်နာမည် ဗိုလ်အောင်နိုင်ပါ"
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ရင်း ထိုဦးလေးကြီးအနားမှာ ပင် ထိုင်လိုက်သည်။
"သြော် - ဗိုလ်ကြီးက တပ်မ(-) ကကိုး၊ ဦးနာမည်က အောင်ထွန်းကွဲ့"
"ဟုတ်ကဲ့ ဦးလေး၊ သိရတာ ဝမ်းသာ ပါတယ်"
ဘတ်စ်ကားကို တိုးဝှေ့ စီးရသဖြင့် စိတ်ကျဉ်းကျပ် လာခဲ့သလောက် အုတ်ခုံ ပေါ်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိုင်ပြီး စီးကရက်ကို အားရပါးရ ဖွာရှိုက်လိုက် ရသည့်အခါတွင် ကျွန်တော့်စိတ်သည် ပေါ့ပါး လန်းဆန်း၍ လာသည်။ လွတ် လပ်ခြင်း၊ ကျယ်ပြန့်ခြင်း၏ အရသာကို ကျွန်တော် ခံစား နေရသည်။
"ဒါနဲ့ ဦးလေးက ဘယ်တပ်ကလဲ ဟင်၊ အခုကော တပ်ထဲမှာ ပဲလား"
ဦးလေးကြီးသည် ဆေးလိပ်ငွေ့ များကို မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း ရီဝေသော မျက်လုံးများဖြင့် အဝေးသို့ ငေးစိုက် ကြည့်လိုက်သည်။
"တပ်ထဲက ထွက်လိုက်တာ ကြာ ပါပြီကွယ်"
"ဟာ ဦးလေးကျန်းမာရေး အခြေ အနေက တော်တော် ကောင်းသေးတာပဲ ဦးလေးရဲ့၊ ကောင်းကောင်း တာဝန် ထမ်းဆောင် နိုင်သေးတာပဲ ဦးလေးရယ်၊ တပ်ထဲက ထွက်တာ စောမနေဘူးလား"
"မစောပါဘူး ဗိုလ်ကြီးရယ်၊ ခြေ တစ်ဖက်မှ မရှိတော့တာ"
ကျွန်တော့်မျက်လုံးများသည် ဦးလေးကြီး၏ခြေထောက်ဆီသို့ အလို အလျောက် ရောက်သွားမိသည်။ ခြေ အတုတပ်ထားသော ဦးလေးကြီး၏ ဘယ်ခြေထောက်နှင့် အုတ်ခုံဘေးတွင် လှဲချထားသော ချိုင်းထောက်ကို ယခုမှ ပင် ကျွန်တော်သတိထားလိုက်မိသည်။ နီညိုရောင် သစ်သားခြေတုကြီးကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့် ရင်ထဲတွင် နင့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။
"ဦးလေး အခုလူနာလာကြည့် တာလား"
"ဒါဖြင့် ဆေးရုံထဲ ဝင်ကြရအောင်၊ ဂိတ်တံခါးဖွင့် နေပြီ၊ ဦးလေးကို ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်း တွဲခေါ်မယ်"
"ရပါတယ်ဗိုလ်ကြီးရယ်၊ မလိုပါ ဘူးကွယ်"
ဦးလေးကြီးသည် ပြောပြောဆိုဆို နှင့် အုတ်ခုံနံဘေးတွင် လှဲချထားသည့် ချိုင်းထောက်ကို ကုန်းကောက်ရင်း ချိုင်းထောက် အကူဖြင့် ထိုင်ရာမှ ထလိုက် သည်။ နှစ်ယောက်သား ဆေးရုံဝင်း အတွင်းသို့ တစ်လှမ်းချင်း ဝင်လာကြသည်။
"ဦးလေးတို့ သားအဖ ကံမကောင်း ကြဘူးကွယ်"
"ဗျာ ဦးလေးတို့သားအဖ ဟုတ် လား"
"ဟုတ်တယ်ဗိုလ်ကြီး၊ အခု ဦးလေး သားကြီးလည်း ဒဏ်ရာရပြီး မနေ့ကပဲ ဒီဆေးရုံကို ရောက်လာတယ် ဆိုလို့ သူ့ကို ဦးလေး လာတွေ့တာ"
"ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဦးလေးရယ်၊ ဒီလိုဖြစ်ရတာကို ကျွန်တော် စိတ်မကောင်း ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း စစ်သား ဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ဦးလေး။
ကျွန်တော်လည်း သင်တန်းတက်ဖို့ အတွက် မနေ့ကမှ ရှေ့တန်း ဌာနချုပ်က ပြန်လာတယ်။ ကျွန်တော် ဌာနချုပ်ကို မရောက်ခင် ခြေလျင်တပ်မှာ နေတုန်းက ကျွန်တော့် တပည့် တစ်ယောက်လည်း ရှေ့တန်းမှာ ဒဏ်ရာရပြီး ဒီဆေးရုံကို ရောက်လာတယ် ဆိုလို့ ကျွန်တော်လာ တွေ့တာ၊ စစ်ပွဲ ဆိုတော့လည်း သေနတ် တွေ၊ ဗုံးတွေနဲ့ ပစ်ကြ၊ ခတ်ကြ၊ တိုက် ကြရတာ မဟုတ်လား၊ ပန်းနဲ့ပေါက် ကြတာ မဟုတ်တော့လည်း ထိကြ၊ ခိုက် ကြတာပေါ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အတွက် တရားသော စစ်ကို တိုက်နေကြ တာပဲမဟုတ်လား။ ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘက်က ရှိနေ ပါတယ်လေ"
"ဒါပေါ့ ဗိုလ်ကြီးရယ်၊ ဒီကောင် က ကျွန်တော့်ထက် ပိုဆိုးတယ်၊ ကျွန် တော်ကမှ တပ်ထဲမှာ ဒုတိယ အရာခံ ဗိုလ်အဆင့် အထိ တာဝန် ထမ်းခဲ့သေး တယ်။ ဒီကောင် အခု တပ်ကြပ်ကြီးပဲ ရှိသေးတာ၊ အသက်က ဘာရှိဦးမှာလဲ၊ သုံးဆယ့် တစ်နှစ်ပဲ ရှိဦးမယ်"
"ဦးလေးသားက ဘယ်တပ်ကလဲ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲ ဦးလေး"
"မောင်မောင်၊ တပ်ကြပ်ကြီး မောင်မောင်၊ အမှတ်(-) ခြေမြန်တပ်ရင်း က"
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် သံသယ တစ်ခုဝင်လာမိသည်။
"မြခင်ယောက်ျား မောင်မောင် လား ဦးလေး"
ဦးလေးကြီးသည် သူ့ခြေလှမ်းကို တုံ့ခနဲ ရပ်လိုက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်အား စူးစမ်းသလို မော့ကြည့်လိုက်သည်။
"ဗိုလ်ကြီး ဒီကောင့်ကို သိတယ် နော်"
"မြခင်ယောက်ျား မောင်မောင် လား"ဟု ကျွန်တော် ထပ်မေးလိုက်မိသည်။
"ဟုတ်တယ်ကွဲ့၊ မြခင်ယောက်ျား မောင်မောင်"
"ဘာတုံးကွ၊ မင်းဘာလာရှုပ်ဦး မလို့လဲ"
တိုက်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် မြေပုံပေါ် တွင် လမ်းကြောင်း သုံးသပ်ရွေးချယ် လျက်ရှိစဉ် ကျွန်တော့်ကို ခေါ်လိုက်သ ဖြင့် ကျွန်တော် စိတ်တိုသွားမိသည်။
မောင်မောင့် အကျင့်ကို ကျွန်တော်သိပြီး ဖြစ်သည်။ ရန်သူနှင့် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ပြင်ဆင်ပြီဆိုလျှင် မောင်မောင်တစ် ယောက် အူမြူး နေတတ်သည်။ ရဲဘော် တွေကို စçသည်၊ နောက်သည်၊ ပြောင် သည်။ တပ်စု တပ်ကြပ်ကြီးလည်း မနေ ရ၊ ကျွန်တော့်ကိုပင် ချစ်ခင်စွာ လေးလေးစားစား ပြောလေ့ ဆိုလေ့ရှိ သည်။ သူ့အကျင့်ကို သိထားပြီး ဖြစ်၍ သူ့ကို လှမ်းမေးလိုက်ရသည်။
"ဒီစစ်ဆင်ရေး ပြီးရင် မြခင်ကို တောင်းပေးနော် ဗိုလ်ကြီး"
ကျွန်တော်တို့ တပ်စု ရေအိုးစင် ရွာကလေး၌ တာဝန် ကျသည်မှာ နှစ်လ ခန့်သာ ရှိသေးသည်။ ရွာလယ်ဈေးဆိုင် မှ မြခင်ကို မောင်မောင် တစ်ယောက် မျက်စိကျ နေပေပြီ။ မြခင်ကလည်း မျက်စိကျလောက် စရာပင်။ မလှသော် လည်း အသားညိုစိမ့်စိမ့်၊ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည် တောင့်တောင့်တင်းတင်း၊ မျက်လုံးမျက်ခုံး ကောင်းကောင်း၊ နှာတံပေါ်ပေါ်နှင့် ကြည့်လို့ကောင်း သည်။ ဈေးသည်ပီပီ နှုတ်ချိုသည်၊ ဖော်ရွေသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မြခင်၏ ဈေးဆိုင်၌ ဝယ်သူမစဲ တသဲသဲနှင့် အမြဲလိုပင် စည်ကားနေလေ့ ရှိသည်။
တပ်စုအတွင်း၌ ဈေးဝယ်သည့် အဝယ် တော်ရာထူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာခဏ ပြဿနာဖြစ်ရသည်။ ဈေးဝယ်လွှတ် ကြတော့မည် ဆိုလျှင် သူသွားမည်၊ ငါသွားမည်နှင့် အလုအယက်။ ထိုအထဲ တွင် မောင်မောင် တစ်ယောက် အကဲ ဆုံးဖြစ်သည်။ မြခင်ဆိုင်မှာသာ ဈေးဝယ်ရမည် ဆိုလျှင် မောင်မောင် တစ်ယောက် ကဖြင့် မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာနေ လျှင်လည်း သွားသည်။ နေချစ်ချစ် တောက် ပူနေလျှင်လည်း သွားသည်။
မြခင်ဈေးဆိုင် အနီးတွင် မည်သို့သော ပြဿနာ ရှိနေစေကာမူ မောင်မောင် တစ်ယောက် ဂရုမထား၊ သွားမည်သာ ပင်ဖြစ်သည်။
"မင်းဟာက ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့ လား မောင်မောင်ရယ်၊ ကောင်မလေးက မင့်ကို ကြိုက်လို့လား"
"သေချာပါတယ် ဗိုလ်ကြီးရဲ့၊ မနေ့ကလေ ကျွန်တော်နဲ့ရွာထိပ်မှာ ရေခပ်နေရင်းတွေ့တော့ သူ့မျက်နှာ တစ်ခုလုံး ပြုံးနေတာပဲ၊ မျက်လုံးတွေ ကလည်း အရောင်တဖျတ်ဖျတ်တောက် လို့၊ ပြီးတော့ ..."
"တော်စမ်းပါကွာ မောင်မောင် ရာ၊ မင်းကိုတွေ့တွေ့ချင်း ပြုံးမပြလို့ မဲ့ပြရမှာလား၊ သူများ သားသမီးကို တောင်းတယ်ဆိုတာက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေကျေနပ်နပ် ရှိမှကွ"
"မြခင်သာ ခွေးကလေး၊ ကြောင် ကလေးဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ၊ ဗိုလ်ကြီးကိုတောင် သွားမတောင်းခိုင်း ဘူး။ တိတ်တိတ်ကလေး ခေါ်လာပြီး သွားလေရာ ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့် လွယ်ထားမှာ၊ အခုတော့ လူမကလေး ဖြစ်နေလို့သာပေါ့။"
"ဟေ့ကောင် ... သောက်ရူး၊ တော်စမ်းကွာ"
"ဗိုလ်ကြီး ... တောင်းပေးနော်၊ စစ်ဆင်ရေးမှာ ကျွန်တော် တာဝန်ကျေ အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမယ်၊ စစ်ဆင်ရေး တာဝန် ပြီးရင်တော့ တောင်းပေးပါ ဗိုလ်ကြီးရာ"
ကျွန်တော် ဒီကောင့်ကို စိတ်မ ရှည်နိုင် တော့သဖြင့် မျက်နှာတည်တည် ထားပြီး ဟောက်ပစ်လိုက်ရသည်။
"မောင်မောင် မင်း ... မြခင်ကို စိတ်ဝင်စား တာလား၊ တာဝန်ကို စိတ်ဝင်စား တာလား ပြောစမ်း ..."
မောင်မောင် ခေါင်းငုံ့သွားသည်။ အတန်ကြာမှ ...
"ကျွန်တော် နားလည်ပါတယ် ဗိုလ်ကြီး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့တာဝန်ဟာ ဘာလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်"
"သိရက်သားနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အချစ်ရေးကို စဉ်းစားနေရတာလဲ"
"ကျွန်တော် မြခင်ကို တကယ် စိတ်ဝင်စား နေလို့ပါ ဗိုလ်ကြီး"
"လာပြန်ပြီ ဒီမြခင်၊ သွား ဆရာကြီး ကျော်မြကို သွားပြော။ နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ် ကြာရင် တို့ တပ်စု တစ်စုလုံး ထွက်မယ်လို့၊ မင်း လည်း အသင့်ပြင်တော့၊ သွားတော့ ..."
အလေးပြုကာ လှည့်ထွက်သွား သော မောင်မောင့် ကျောပြင်ကို ငေးစိုက် ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဇွတ်တရွတ် လုပ်တတ်သော ကျွန်တော့် တပည့်ကျော် မောင်မောင်ကြောင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက် မကြာခဏ စိတ် ပူရသည်။ ကြောင့်ကြရသည်။ စိတ်ညစ် ရသည်မှာ များပေပြီ။ ယခုလည်း မကြာခင် စစ်ဆင်ရေး တာဝန် တစ်ရပ် ဆင်နွှဲရတော့မည်။ မြခင်ကို စိတ်ဝင်စား စဉ် တာဝန်ကို မေ့နေတတ်သည့် မောင်မောင့်အတွက် ကျွန်တော့်ရင်မှာ ပူရသည်။
လရောင် ထွက်ပြူစ ပြုသည်နှင့် ကျွန်တော်တို့ စတင် ချီတက် ကြသည်။
မှုန်မွှားမွှား လရောင်အောက် တွင် လမ်းနှင့် ရွာများကို ကွင်းရှောင်ပြီး တောတိုး ချီတက် ကြရသဖြင့် ချွေးသီး ချွေးပေါက်တို့ စိုရွှဲ၍ နေသည်။ မြေဝပ် ငှက်တို့ ရုတ်တရက် ထပျံကြသည်။ မမြင်မစမ်းနှင့်မို့ ခလုတ်တိုက်ပြီး လဲသူ လဲ၊ ချောက်ထဲ ပြုတ်ကျသူ ပြုတ်ကျ၊ တောင်ကျချောင်းကလေး များကို ဖြတ်ကူး ချိန်တွင် ရေစီးနှင့် မျောပါသူ မျောပါနှင့် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးဖြတ်ကျော်ပြီး တစ်ညလုံး ချီတက် ခဲ့ရသဖြင့် အလွန်ပင်ပန်း နွမ်းနယ် နေကြသည်။ တောကြီး မျက်မည်းထဲ၌ ညအချိန် ချီတက်ကြ ရသည့် အခက်အခဲကို ကျွန်တော်တို့ သာလျှင် နားလည်သည်။
မိုးမရွာ၍ တော်သေးသည်။ နံနက် လေးနာရီ မထိုးမီ ရန်သူ့စခန်းသို့ ရောက် ရှိကြပြီး ရန်သူ့စခန်းကို ခဏအတွင်း ဝိုင်းပတ် ထားလိုက်ကြသည်။ မှုန်မွှားမွှား လသည် လုံးဝ ဝင်သွားပေပြီ။ ရောင်နီ ပေါ်မလာ သေးသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေသည်။
အလင်းရောင် လာသည် အထိ ကျွန်တော့် တပ်စုကို အနားပေးပြီး တစ်ညလုံးချီ တက် ခဲ့ရသဖြင့် ကုန်ခန်းသွားသော ခွန် အားတို့ကို ပြန်မွေး ရပေဦးမည်။ သစ်ပင် တစ်ပင်၏ ပင်စည်ကို ကျောမှီရင်း မျက်စိ နှစ်လုံးကို အသာမှိတ်ကာ အမောဖြေ လိုက်သည်။ မှုန်မွှားမွှား လရောင်အောက် တွင် မြင်ထားခဲ့သော ရန်သူ့စခန်းသည် ကျွန်တော့် အာရုံထဲ၌ အထင်းသားပေါ် လာသည်။
သက်ငယ်တဲ ငါးလုံးထက် တွင် ရန်သူတို့သည် အိပ်မောကျ၍ ကောင်းတုန်းပင် ရှိပေမည်။ အချို့သည် လည်း တမလွန် ဘဝ အတွက် အိပ်မက် များပင် မြင်မက်နေပြီလားမသိ။
ကျွန်တော့် မျက်လုံးများ ပြန်ဖွင့်လိုက် ချိန်၌ သောကြာကြယ်သည် မာကျူရီ မီးလုံးကြီးနှယ် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း နှုတ်ခမ်း ထက်၌ တောက်ပ၍ နေပေပြီ။ အရှေ့ ဘက်အရပ်ဆီမှ ရောင်နီ ပေါ်လာပြီဖြစ်၍ ရန်သူ့တဲများကို နောက်ခံ ရောင်ခြည် များ ရှေ့တွင် မှုန်ဝါးဝါး မြင်နေရသည်။
အချင်းချင်း လက်တို့ကာ အချက် ပေးလိုက် သည်နှင့် ရန်သူ့ စခန်းကုန်းဆီသို့ ဝပ်တွား၍ တက်ကြသည်။ ငိုက် မျဉ်းနေသော ရန်သူ့ ကင်းသမားသည် မောင်မောင်၏ လှံစွပ်များနှင့် ထိတွေ့ပြီး တစ်သက်လုံး မနိုးသော အိပ်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်သက်စွာ အိပ်ပျော်သွားသည်။
မောင်မောင်၏ ဂျီသရီး ပြောင်းဝမှ သေနတ်သံနှင့် အတူ တိုက်ပွဲစပေပြီ။ လက်နက်ငယ်သံ၊ လက်ပစ်ဗုံးသံနှင့် အမ် ၇၉ ဗုံးပစ်သေနတ်သံတို့ဖြင့် ခဏချင်း ပွက်ပွက်ညံသွားတော့သည်။ မျက်စိရှေ့၌ပင် ရန်သူ့ တဲသုံးလုံး မီး လောင်၍ နေပေပြီ။ တဟုန်းဟုန်း တောက် လောင် နေသည့် မီးရောင်အောက်တွင် သွေးရူး သွေးတန်းဖြင့် အော်ဟစ် ညည်း တွားကာ ခြေဦးတည့်ရာ ပြေးလွှားနေ သော ရန်သူများကို လိုက်လံ ပစ်ခတ် ချေမှုန်းနေရင်း ကျွန်တော့်ရှေ့မှ မောင်မောင် တစ်ယောက် ခွေခနဲ မြေပေါ်သို့ လဲကျ သွားသဖြင့် ကျွန်တော့် ရင်ထဲ၌ ထိတ် သွားမိတော့သည်။
မောင်မောင့်အား ကျွန်တော် ပြေး ပွေ့နေသည့် ခဏအတွင်း၌ပင် တိုက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားသည်။ ရန်သူ့စခန်း တစ်ခု လုံးကို ကျွန်တော်တို့ သိမ်းပိုက် ရရှိလိုက် သည်။
နံနက်ခင်း၏ နေခြည်အောက် တွင် ရန်သူ အလောင်းကောင်များ မြင် မကောင်းအောင် ပုံပျက် ပန်းပျက် ဟိုသည် ပြန့်ကျဲ၍ ရှိနေသည်။ ထို တိုက်ပွဲတွင် မောင်မောင် တစ်ယောက်သာ ညာဘက်ပေါင်တွင် ဒဏ်ရာရပြီး ရန်သူ အသေ ခုနစ်ယောက်နှင့် အရှင် နှစ်ယောက် ဖမ်းမိကာ လက်နက်မျိုးစုံ ၁၀ လက်ရရှိလိုက်သည်။ အရင်းနည်း နည်းနှင့် အမြတ်များများ ရလိုက်သော တိုက်ပွဲ၊ ရန်သူ ဦးကျိုးသွားသော အလှည့် အပြောင်း တိုက်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။
တိုက်ပွဲတွင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ သက်စွန့် ဆံဖျား တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့သော မောင်မောင် အား နိုင်ငံတော်က သူရဲကောင်းမှတ် တမ်းဝင် ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှူးက မောင်မောင့်အား ဒုတိယ တပ်ကြပ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့် ပေးလိုက်သည်။ ကျွန်တော်သည်လည်း မောင်မောင် ဒဏ်ရာပျောက်၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းလာသော အခါတွင် သူအလွန်ချစ်သော မြခင်ကို မိသားဖသားပီပီ လူကြီးစုံရာဖြင့် တောင်းရမ်းပေးခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲသည် မောင်မောင့်အတွက် မမေ့နိုင်သော မှတ်တမ်းကလေး တစ်ခုပင် ဖြစ်တော့ သည်။
လူ့သမိုင်းသည် တက်ချည် ဆင်း ချည်၊ နိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြင့် ပြောင်းလဲ နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန် ပြောင်းလဲ နေသကဲ့သို့ တစ်ခါ တစ်ရံ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရုတ်တရက် မြန်မြန် ပြောင်းလဲသည်လည်း ရှိသည်။ လူ့ဘောင်အတွက် အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကြဉ်းသော ဝါဒ စနစ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တို့သည် ကြာရှည်စွာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲပြီး ဆိုးသွမ်း ရိုင်းစိုင်း၍ ရက်စက် ယုတ်မာသော ဝါဒစနစ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တို့မှာ လူသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို မျက်ကွယ် ပြုခဲ့သဖြင့် ခဏချင်း ကျဆင်း ပျက်သုဉ်းကာ ပြည်သူ တို့၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံကြရသည်သာ ဖြစ်သည်။
ရိုးမ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီ အဖွဲ့သည် လည်းကောင်း၊ ဗမာပြည်ကွန် မြူနစ် ပါတီသည်လည်းကောင်း ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ပြည်သူတို့၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို မရှုမလှ ခံကြရပြီး ဗုန်း ဗုန်းလဲကာ ပြိုကွဲ ပျက်စီး သွားခဲ့ရပေသည်။
အလုပ်သမား၊ တောင်သူလယ် သမားများ အပါအဝင် ပြည်သူအများ ကောင်းကျိုးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းသည် တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲခြင်း ဖြစ်ပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်သည့် တရားသောဘက် မှ တိုက်ပွဲဝင် သူတို့သည်သာ ရေရှည် တွင် အောင်ပွဲဆင်ကြရ စမြဲပင် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရသည် ပြည်သူ အများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ကာယ အား၊ ဉာဏအား စွမ်းပကားတို့ဖြင့် စွမ်းအား ရှိသမျှ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား တည်ဆောက် နေချိန်တွင် အရှေ့မြောက် ဒေသ ဗကပ တို့သည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှ သည် ယနေ့ အချိန်အထိ နယ်စပ်ဒေသ များတွင် အဖျက်အမှောင့် လုပ်ငန်းများ ကို အစွမ်းကုန် ပြုလုပ်လျက်ရှိကြသည်။
အသက်၊ သွေး၊ ချွေးတို့ဖြင့် စတေးကာ ခက်ခက်ခဲခဲ ရယူခဲ့သော နိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်စိုးမှုတို့ကို ပျက်သုဉ်းအောင် ဖန်တီး လျက်ရှိပြီး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို ကျွန် ဇာတ်သွင်းရန်အတွက် အမျိုးမျိုးကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြသည်။
တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးဘက်မှ ထာဝရ ရပ်တည်လျက် သမိုင်း အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သည့် တပ်မတော်သည် ပြည်သူ တို့နှင့် လက်တွဲကာ အရှေ့မြောက်ဒေသ ဗကပတို့အား ချေမှုန်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ တစ်ပွဲပြီး တစ်ပွဲ အောင်ပွဲ ဆင်ခဲ့သည်။တရားသောစစ် အောင်နိုင်ရေး အတွက် ပါဝင် လုပ်အားပေးကြသောပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်သည် ထိုးစစ် ဆင်၍ တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်။ ဗကပတို့ သည် အရူးမီးဝိုင်း ခံနေရသည့်နှယ် စခန်း များကို စွန့်ခွာ၍ တရကြမ်း ဆုတ်ခွာ ထွက် ပြေးနေကြရပေပြီ။
မောင်မောင် တစ်ယောက် အမှတ် (-) ခြေမြန် တပ်ရင်းနှင့် အတူ တိုက်ပွဲ အသီးသီးတွင် ပါဝင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ပင်ကိုကပင် သူရ သတ္တိရှိသော မောင် မောင်သည် ၄င်း၏ တပ်ရင်းနှင့် အတူ တကွပင် ရန်သူ့ စခန်းများကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု သိမ်းပိုက် ရရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယတပ် ကြပ်အဆင့်မှ တပ်ကြပ်အဆင့်၊ တပ်ကြပ် အဆင့်မှ တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်သို့ စစ်ဆင် ရေးအတွင်း၌ပင် စစ်မြေပြင် အဆင့် တိုး မြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ဗပကများ အလုံးအရင်းနှင့် ခုခံ နေသော ပွိုင့်တောင်ကုန်းသည် မောင် မောင်တို့ တပ်ရင်း၏ နောက်ဆုံးရည် မှန်းချက် ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်ကုန်းထိပ် ရှိ ရန်သူအား အနီးကပ်ကာ တက်ရောက် လှံစွပ်ထိုး တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေစဉ် ရန်သူ့ မိုင်းတစ်လုံး နင်းမိ၍ မောင်မောင် တစ် ယောက် လှေလှော်ရင်း တက်ကျိုးသွားခဲ့ရပေသည်။
ချိုင်းထောက်ကြီး တကားကား နှင့် တရွေ့ရွေ့သွားနေသော မော်ကွန်း ဝင် ဦးလေးကြီးကို အသာတွဲရင်း ခွဲစိတ် ဆောင် အတွင်းသို့ ကျွန်တော်တို့ ဝင်လာ ခဲ့ကြသည်။ အစိမ်းရောင်နှင့် အဖြူရောင် ဝတ်ဆင်ထားသော ခွဲစိတ်ဆောင် တာဝန် ခံ ဆရာမလေး ညွှန်ပြသည့် အတိုင်း မောင် မောင့် အခန်းဆီသို့ ကျွန်တော်တို့ လျှောက် လှမ်းလာကြသည်။
တိုင်းပြည်တွင် မိမိတို့၏ ကိုယ် ခန္ဓာကို စွန့်လွှတ်ရဲကြသော စစ်ဆေးရုံ အတွင်းတွင် တွေ့မြင် ကြရသည့် သူရဲ ကောင်း စစ်သည်များအတွက် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် စစ်သား တစ်ယောက် အနေဖြင့် ရင်ထဲတွင် ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာဖြစ်နေမိသည်။
မသန်စွမ်း စစ်သည်ကလေးများ ကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော့် နံဘေးရှိ ဦးလေး ကြီးကို သတိရကာ ငဲ့စောင်း ကြည့်လိုက် မိသည်။ ဦးလေးကြီး၏ မျက်လုံးအစုံ သည် ကြမ်းပြင်ဆီသို့ စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်နေပြီး မေးကြောကြီးများ တင်းနေ အောင် အံကို ကြိတ်ထားသည်။ ကျွန် တော့်ရင်ထဲ၌ မည်သို့ ခံစားရသည်ကို ထိုးဖောက် မြင်သည့်နှယ်။
"ဦးတော့ ဝမ်းမနည်းဘူး၊ စစ်သား တစ်ယောက် အနေနဲ့ အခုလို စွန့်လွှတ်ရဲ တာကို ဂုဏ်ယူတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေးကို အဓွန့်ရှည်အောင် ကာကွယ်ရမှာ ဦးတို့၊ ဗိုလ်ကြီးတို့ရဲ့ မွေးရာပါ တာဝန်ပဲ၊ တောက်- ဦးခြေထောက်သာ ကောင်းရင် ဒီရဲဘော်လေး တွေနဲ့ တွဲပြီး ရန်သူကို တိုက်လိုက်ချင် သေးတယ်"
စစ်သားကြီး၏ သံမဏိ စိတ်ဓာတ် ကို ကြားသိ လိုက်သဖြင့် ကျွန်တော့် တစ် ကိုယ်လုံး ကြက်သီးမွေးညင်း များပင် ထသွားမိသည်။
"တော်ပါတော့ ဦးလေးရယ်၊ တိုင်း ပြည်အတွက် ဦးလေးအဖို့ တာဝန်ကျေပွန် လွန်းလှပါပြီ။ ဒီတာဝန်တွေကို ကျွန် တော်တို့၊ မောင်မောင်တို့ တစ်တွေ ပခုံး လွှဲပြောင်း ထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်။"
စကားတပြောပြောနှင့် လျှောက် လှမ်းလာကြရာ မောင်မောင့် အခန်းဝသို့ ရောက်သည်တွင် ကျွန်တော် ခြေလှမ်းများ တုံ့ခနဲ ရပ်တန့် သွားသည်။
မြခင်...။ သေချာပါသည်။ မြခင်မှ မြခင်အစစ်။ မတွေ့ရသည်မှာ လေး၊ ငါး၊ ဆယ်နှစ် ကြာသည့်တိုင် အသားညိုညို၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် တောင့်တောင်၊ မျက်လုံး မျက်ခုံးကောင်းကောင်းနှင့် မြခင်ကို ကျွန်တော်ကောင်းကောင်း မှတ်မိသည်။ မှန်ပြတင်းမှ ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်နေသည့် ဝင်လုဆဲ နေခြည် ဖျော့ဖျော့ အောက်တွင် မြခင်၏ မျက်နှာ သည် ပြုံး၍ နေသည်။
သို့သော် ဝင်းလက် တောက်ပနေ သည့် မြခင်၏ မျက်လုံး အစုံတွင် မျက် ရည်ကြည်တို့ ရစ်ဝိုင်း သိုင်းဖွဲ့လျက်ရှိနေ သည်။မြခင်တစ်ယောက် ပြုံးနေသည် လား၊ ငိုနေသည်လား ကျွန်တော် ခွဲခြား မရ။ သူ့အပြုံးတွင် မျက်ရည်စတွေနှင့်။
"အစ်ကို ...အစ်ကို ဘာမှ အား မငယ်နဲ့နော်၊ မြခင် အစ်ကို့ ဘေးနားမှာ ရှိနေတယ်လေ"
မြခင် အသံသည် တုန်ခါလျက် ရှိ ပြီး လှိုက်လှဲ ကြေကွဲဖွယ် ကောင်းနေ သည်။ မြခင်၏ လက်အစုံသည် မောင် မောင်၏ တစ်ဖက်တည်းသာ ကျန်ရှိသော ညာလက်ရုံးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ် ကိုင်ထားရင်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေ သည်။
"မြခင်လေ ပညာမတတ်ပေမယ့် ဈေးတော့ ရောင်းတတ်ပါတယ်။ ဈေး ရောင်းပြီး အစ်ကို့ကို မြခင် ရှာကျွေးမယ်၊ အစ်ကို ဘာမှ အားမငယ်နဲ့နော်"
ချစ်ခင်ပွန်းကို အားပေးစကား ပြောကြားရင်း မြခင် ရင်တွင်းမှ ရှိုက်သံ သဲ့သဲ့တို့သည် တစ်ချက် တစ်ချက်တွင်တိုးတိုးညင်းညင်း ထွက်လာသည်။
မြခင်၏ မျက်ဝန်း အစုံမှ ပါးပြင် ထက်သို့ တလိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာသည့် မျက်ရည်ပူများကို ယမ်းခိုး ရိုက်ထား သဖြင့် မျက်လုံး နှစ်ဖက်စလုံး ပတ်တီး စည်းထားသော မောင်မောင်တစ်ယောက် မမြင်ရ၍ တော်သေးသည်။
"မြခင် အားမငယ်နဲ့ကွာ၊ အစ်ကို့ မှာ ခြေတစ်ဖက်နဲ့ လက်တစ်ဖက်မရှိ တော့ပေမယ့် ခြေတစ်ဖက်နဲ့ လက်တစ်ဖက် ကျန်နေသေးတာပဲ၊ တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ကျရာ အခန်းက အစ်ကိုထမ်းဆောင် နိုင်ပါသေးတယ်ကွာ"
မြခင်ထံမှ ရှိုက်သံတစ်ချက် သိမ့် ခနဲ ထွက်လာသည်။
မြခင်တစ်ယောက် မျက်ရည်များ ကို ကမန်းကတန်းသုတ်ပြီး ပြုံးလိုက်သည်။
"မငိုပါဘူးအစ်ကိုရယ်၊ မြခင်မငို ပါဘူး၊ မြခင် ဘာဖြစ်လို့ ငိုရမှာလဲ၊ အစ်ကို့အတွက် မြခင် ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံး ပါဘူး အစ်ကိုရယ်။ ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုး ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး တိုင်းပြည် တာဝန်ကို ကျေကျေပွန်ပွန် ထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့ အစ်ကို့ လို စစ်သားကောင်း တစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမ ဖြစ်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးပါ ဘူး အစ်ကို"
"ပြောပါအစ်ကို၊ မြခင်အနားမှာ ရှိပါတယ်"
"အစ်ကို့ သားကြီးကော ပါလား ဟင် ..."
"ပါလာပါတယ် အစ်ကို၊ အစ်ကို့ ခုတင်နံဘေးက ခုံပေါ်မှာ ထိုင်နေပါ တယ်"
"အစ်ကို့သားကြီးကို ခုတင်ပေါ် တင်ပေးစမ်းပါ"
တစ်ဖက်တည်းသာ ကျန်ရှိသော လက်ဖြင့် သားငယ်ကိုတင်းတင်းကျပ် ကျပ်ပွေ့ဖက်ရင်းမှ ...
"ငါ့သားကြီးလာရင် ဘာလုပ်မ လဲဟင် - သား"
သားငယ်သည် မိခင်၏မျက်နှာ ကို သမင်လည်ပြန် ပြန်ကြည့်ကာအတန်ကြာ စဉ်းစား၍ နေသဖြင့် မြခင် ကဝင်ရောက် အားပေးလိုက်သည်။
"သားကြီး - ပြောလိုက်လေ၊ ဖေဖေကြီး မေးနေတာဖြေလိုက်"
"ပေပေ့လို ကြစ်တားကြီးလုပ် မယ်"
"ဒါမှဖေဖေ့ သားကြီးကွ။ ဖအေ့ တာဝန်ကို ပခုံးပြောင်း ယူမယ့် သားကြီး ဟေ့"
ဝမ်းသားအယ်လဲ အော်လိုက်သော မောင်မောင်၏အသံသည် အခန်းတွင်းမှ တုန်ခါ၍ အခန်းဝတွင် ရပ်နေသော ကျွန်တော့်ထံသို့ ပျံ့လွင့်ထွက်လာသည်။
ကျွန်တော့် ရင်တွင်းသို့ ရိုက်ခတ် စိမ့်ဝင် ၍ သွားသည်။
မောင်မောင်၏ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် စိတ်သည် ကျွန်တော့် ရင်တွင်းသို့ သာမက တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲ နေကြသော ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ အသည်းနှလုံး အတွင်းသို့တိုင် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် သွားပေမည်မှာမုချ။
"အေးပါ ... ငါ့သားဟာ စစ်သား ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်သလို ငါ့မြေး ဟာလည်း စစ်သားပဲ ဖြစ်ရမယ်၊ အိုကွာ တို့တစ်မျိုးလုံးဟာ တို့တိုင်းပြည်ကာ ကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် စစ်သား တွေပဲ ဖြစ်ရမယ်ဟေ့"
ချိုင်းထောက်ကြီး တကားကားနှင့် ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ကြုံးဝါးကာ မောင် မောင့်အခန်းတွင်းသို့ လှမ်းဝင်သွား သော စစ်သားအိုကြီး၏ ကျယ်ပြန့်သော ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင် အခန်းဝတွင် ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ရပ်လျက် ငေးငိုင်ကာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဧရာဝတီသည် မြစ်ဖျားမှ သည် မြစ်ဝဆီသို့ တသွင်သွင် အဆက်မပြတ် စီးဆင်း၍ နေသည်။ ယခင်ကလည်း စီးဆင်း နေခဲ့သည်။ ယခုလည်း စီးဆင်း နေဆဲပင်။ နောင်တွင်လည်း ကမ္ဘာ တည်သရွေ့ စီးဆင်း နေဦးမည်သာဖြစ်သည်။
တိုင်းပြည်ကို ချစ်သော စစ်သား အိုကြီး ဒုတိယ အရာခံ ဗိုလ်အောင်ထွန်း သည် သူ၏ ခြေတစ်ဖက်ကို စတေး၍ တိုင်းပြည်အတွက် လွတ်လပ်ရေးကို ရယူပေးခဲ့သည်။
မော်ကွန်းဝင် စစ်သားအိုကြီး၏ သား စစ်သားကလေး မောင်မောင်၊ ဒုတိယ တပ်ကြပ်မှသည် တပ်ကြပ်ကြီး အထိ စစ်မြေပြင်တွင် ရာထူး အဆင့်ဆင့် ရရှိခဲ့သော သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တပ်ကြပ်ကြီးမောင်မောင်၊ ဖခင်၏ မပြီး ဆုံးသေးသော တာဝန်ကို ဖခင်ထံမှ ပခုံးလွှဲပြောင်း ယူကာ ခြေတစ်ဖက်နှင့် လက်တစ်ဖက် ကို စွန့်လွှတ်၍ တိုင်းပြည် ၏ လွတ်လပ်ရေးကို အဓွန့်ရှည်အောင် ကာကွယ် ပေးခဲ့သည်။
သြော် -တိုင်းပြည်ကို ချစ်သော ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး၏ တိုင်းချစ်ပြည် ချစ်စိတ်သည် သားစဉ် မြေးဆက်တိုင် အောင် ကမ္ဘာတည် သရွေ့ ဧရာဝတီမြစ် ကြီးနှယ်ပင် စဉ်ဆက်မပြတ် တသွင်သွင် စီးဆင်း နေပေတော့မည် တကား ။ ။
(မင်းရန်အောင် စစ်ဆင်ရေးမှ တိုက်ပွဲဝင် စစ်သည်များကို ဂုဏ်ပြု လျက်)
နှစ် (၆၀) ပြည့် စိန်ရတု အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေသော ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မြဝတီ မဂ္ဂဇင်းတွင် သိန်းစိန်ထွန်း ဆိုသော ကလောင် အမည်ဖြင့် ရေးသားထားသော နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ လက်ရာဝတ္ထုတို တစ်ပုဒ် ၊ မြဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)၊ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓာတ် စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး လက် အောက်ရှိ မြဝတီ စာပေတိုက်မှ ၁၉၅၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က စတင် ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုဝတ္ထုမှာ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလထုတ် မြဝတီ မဂ္ဂဇင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခု ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 6:30 PM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မြိတ်မြို့ရှိ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံကို ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ(ဓါတ်ပုံ ၁၁ ပုံ)
မြိတ်မြို့ ကျောက်ဖျာ ကျေးရွာအုပ်စ လော့လော ကျေးရွာတွင် တည်ဆောက်မည့်ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံအား ကန့်ကွက်သူများက (၄)ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ် ကန့်ကွက်ခဲ့ ပြီးနောက် တစ်ပတ်အကြာ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီအချိန်တွင် အင်အား ထောင်ချီ ပါဝင်သော မြိတ်လူထုက ပုလဲရတနာ ခန်းမကာ စတင်ကာ ကမ်းနားလမ်း တစ်လျှောက် ကန်ကြီးလမ်းဆုံ (တြိဂုံအ၀ိုင်း) အထိ ချီတက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးလှည့်လည် ချီတက် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ကြသည်။
၄င်း ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်သူများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ၀ ရရှိရေး၊ မြိတ်ခရိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊အလုပ်ရုံ စက်ရုံများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ အလုပ်ရုံ စက်ရုံများ
ပေါ်ထွန်းလာရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့နည်း ပပျောက်ရေး၊ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေ လျော့နည်း ပပျောက်ရေး၊ ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်မှုအောင်မြင်ရေး၊ စသည့် ကြွေးကြော်သံများ ဖြင့် ကမ်းနား လမ်းတစ်လျှောက်ချီတက် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးနောက် နံနက် (၈)နာရီ (၄၅) မိနစ်ခန့်တွင်
ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု အား ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများသည် မြိတ်ခရိုင် လူထု၏ သဘောထားကြေညာချက်ခေါင်းစဉ်ချက်ဖြင့်တောင်းဆိုချက် (၂) ခုပါဝင်သော ကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။မြိတ်မြို့တွင် ယခုလက်ရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မီးလင်းရေး အဖွဲ့ ၁၀)ခုဖြင့်ဒီဇယ်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၁၃ရုံဖြင့်မြိတ်မြို့တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးလျက် ရှိပြီး ဓာတ်အားခ တစ်ယူနစ်လျှင် ဒီဇယ်ပေါက်ဈေးအရ တစ်ယူနစ် ပျှမ်းမျှခြင်း (၄၅၀) ကျပ် နှုန်း ကောက်ခံလျက်ရှိသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:46 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ, ဓါတ်ပုံကဏ္ဍ, ပန်ကြားပါရစေ
ငါ့အဖေ ဘယ်သူလဲ သိလား လို့မေးတဲံ့ခေတ်ကုန်သွားပြီ.။အဲလိုလာမေးရင် 'အေး.မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ မေးပေးမယ် ပြန်ပြောလိုက်'
From:..The Voice Weekly.
ရန်ကုန်မြို့တော်၌ ညနက်ပိုင်း အချိန်များတွင် ကားပြိုင်မောင်းကာ မင်းမဲ့ စရိုက် ဆန်စွာ ရမ်းကားခဲ့သူ ၂၁ ဦးခန့်မှ ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ မှုခင်းမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။
ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်းပေါ်ရှိ ဟာမစ်တစ် မှတ်တိုင် အနီးတွင် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်ခန့်က ကားပြိုင်မောင်း သူ လူငယ်ကိုးဦး၏ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ခဲ့မှုကြောင့် နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွား ရိပ်သာ၌ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အသက် ၃၁ နှစ် အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးသွား ခဲ့သည်။
အရာရှိကြီးတစ်ဦး၏သားက ထိုရန်ပွဲတွင် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ပြီး ၄င်းနှင့်အပေါင်းအပါထဲတွင် သင်္ဘောသားတစ်ဦးလည်း ပါသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိထားကြောင်း သေဆုံးသွားသူ ကိုရဲကျော်သူ၏ မိသားစုက စုံစမ်းထား မှုကို The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
"ကာယကံရှင်ရဲ့အဒေါ်လို့ပဲ ပြောတယ်။ အမှုပိတ်ပေးဖို့ လာသွား တာပါ။ ငွေသိန်း ၂၀ ပေးမယ်လို့ပြော တယ်။ နာမည်လုံးဝ မပြောဘူး။ ဂျာနယ် မှာပါမှ ကျွန်မတို့တူလေး ဒီလောက် အဖြစ်ဆိုးတာ သိရတာပါ" ဟု သေဆုံးသူ၏ အဒေါ်ကပြောပြသည်။
ယင်းအမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့သူ လူငယ် ကိုးဦးအနက်မှ လေးဦးမှာ ကျန်ရှိခဲ့သော ကားအနီးသို့ ပြန်လည်ချဉ်းကပ် လာစဉ် မျက်မြင်သက်သေများ၏ သတင်းပေးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျန်ရှိသည့်ငါးဦးကို ၄င်းတို့၏ နေအိမ်တွင် သွားရောက်ရှာ ဖွေရာ ညတွင်းချင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြား (သတင်းဖော်ပြပြီး The VoiceWeekly Vol.8, No.44) သည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ နံနက် ၁ နာရီ အချိန်ခန့်က ကမာရွတ်မြို့နယ် (၂) ရပ်ကွက် အင်းစိန်လမ်းနှင့် စံရိပ်ငြိမ် (၃) လမ်း (Excellent Studio) ရှေ့တွင် ပြိုင်ကား တစ်စီး အပါအဝင် ယာဉ်လေးစီးမှ လူခုနစ်ဦး က အခြား ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါသူ များကို သံတုတ်၊ သစ်သားတုတ်များ ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့မှုကို ကမာရွတ် ရဲစခန်းက (ပ)၄၇၃/၁၂၊ ပုဒ်မ- ၄၄၀/၃၃၈/၃၂၅/ ၃၅၄/၂၉၄/ ၅၀၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့ရာ တရားခံခုနစ်ဦးအနက်မှ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။
ထို့အတူ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန် ခန့်က ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် အနော်ရထာလမ်း မီးပွိုင့်တွင် မီးနီ၍ရပ်ထား သော အနက်ရောင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ် တစ်စီးကို ကားပြိုင်မောင်းသူများက သံပိုက်များဖြင့် ရိုက်နှက်မှုတွင် တရားခံ ဟုယူဆရသူများကို ဖမ်းဆီး ရရှိခဲ့သည် ဟု တရားလိုဖြစ်သူက ပြောကြားရာ ယင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ ကျောက်တံတား မြို့နယ်ရဲစခန်း သို့ အတည်ပြုရန် မေးမြန်း ခဲ့ရာတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃၅/၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားပြီး အသေးစိတ် ကိုမူ ဖြေဆိုခွင့်မရှိကြောင်း တာဝန်မှူးက
ရန်ကုန်မြို့တော်၌ ညနက်ပိုင်း အချိန်များတွင် အုပ်စုဖွဲ့၍ မင်းမဲ့စရိုက် ဆန်ဆန်ဖြစ်ပွားသော မှုခင်းအချို့၌ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတွင် လုပ်ငန်းရှင် ကြီးများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အရာရှိကြီး များ၏ သားသမီးများ ပါဝင်သော်လည်း ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကိုမဆို ရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။(မောင်ကျောက်ခဲ အဖွဲ့)
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:07 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
အွန်လိုင်းမှာ မိန်းကလေးပုံတွေကို မဟုတ်တရုတ်လုပ်.ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေကို မိုက်ရိုင်းတဲ့ပုံတွေလုပ်ပြီးဆဲတဲ့ အာကာဟိန်း ဆိုတဲ့လူကို မိပြီ
လူအများကတော့ ထင်မှာပါ လူတစ်ယောက်ကို အလာကား စွတ်စွဲတယ် သက်သေမရှိဘဲလို့ဒီနေ့ တော့ အဲဒီ အာကာဟိန်းအကြောင်း အောက်ပါအတိုင်းရှင်းသွားမှာပါ...
အာဟာဟိန်းက GTone နဲ့BHG Group ကို လိုက်စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့နေ့ မှာဘဲ... သူ့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးများကို အသေရည်ဖျက်မူနဲ့ပြီးတော့ အမျိုးဘာသာ သာသာနာ အပေါ်စော်ကားမူများနှင့်ပတ်သတ်ပြီး သူ သည် မြန်မာပြည်တွင် နေထိုင်ပါက ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ရင်ဆိုင်ရန် သူ့ဘယ်သူလဲဆိုတာကို စုံစမ်းပေးခဲ့ပါသည်၊
လိုက်လံပြီး Sniffing လုပ်စဉ်တွင် အာကာဟိန်းသည် သူ့ အကောင်များကို Firefox နဲ့ သုံးပြီး https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/anonymox/ ကို သုံးထားသောကြောင့် သူ့ အိုင်ပီအတုကို (67.213.218.74) ကို ပထရယူနိုင်ခဲ့သည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်
သူ့ အိုင်ပီ အစစ်ကတော့ လိုက်ဖမ်းရာ 203.81.67.178 ကို ရခဲ့သည်၊
(၎င်းအင်တာနက်ကို ဖုန်းကို သုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည်)
သူသည် http://www.facebook.com/htetsoeaung123 ဆိုသောအကောင့်ကို ကျနော်တို့Sniffing လုပ်ရာတွင် ၀င်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် သူ့ အကောင့်ရဲ့Facebook (ilovestudyandyou09@gmail.com) နဲ့Gmail (ilovestudyandyou09@gmail.com) အကောင့်ကို ၀င်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါသည်၊ ပြီးတော့ ကျနော်တို့http://www.facebook.com/htetsoeaung123 ကို ဖော်ပြသွားပြီး ၃ ရက် မြောက်တွင် အကောင့်သည် Facebook မှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်၊ Account ကို Deactivate လုပ်သွားသော်လည်း ကျနော်တို့ မှာ screenshot များရှိနေဆဲပါ၊
အောက်ပါ Screenshot များသည် ၀က်ရောက်စစ်ဆေးရာတွင်တွေ့ ရှိခဲ့သော အချက်များဖြစ်သည်၊
ဆဲဆိုရိုင်းပြစွာ ပြောဆိုသော Screenshot များမှာ ၂၀ ထက်မက ရှိနေပါသေးတယ်...
ကဲ လူတိုင်း ခန့် မှန်းနိုင်သည်မှာ မည်သူသည် အာကာဟိန်းလဲဆိုတာ...
အထက်ပါအချက်များအရ အာကာဟိန်းသည်၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းကနေစပြီး မိမဆုံးမ ဘမဆုံးမ စကားများနှင့် ပြောနေခဲ့ပါသည် http://www.facebook.com/htetsoeaung123 နဲ့Gtalk များက သက်သေပြခဲ့သည်၊
ပြီးတော့ သံလွင် ရရစ်အားရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း (https://www.facebook.com/trollhat/posts/126823594136635) အတုဟုသမျှသည် နောက်မှ အမြဲ ဖြစ်တတ်ပြီး ရှေ့ က အမြဲမဖြစ်တတ်ပါ။ ဒီပုံကို ကြည့်ပါ… https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441998372513111&set=a.131678853545066.17579.100001088569481&type=3&theater မြတ်ငြိမ်းချမ်း Profile မှာ ဒီပုံကို တင်ခဲ့သည့်နေမှာ Oct 20, 2012 ဖြစ်ပါတယ်… ထက်အောင်စုိုး အကောင့်ကို ကြည့်ကြပါစုို့…. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=345085265543213&set=pb.100001252267848.-2207520000.1351830580&type=3&theater ဒီပုံကို တင်ခဲ့သည့်နေ့ မှာ March 26 ဖြစ်ပါသည်၊
အခု ကုလားပြသနာပေါ်လာတာနဲ့သူ့ အတွက် အခွင့်ကောင်းအနေဖြင့် လူတကာကို Online မှာသာ ဆဲဆိုရိုင်းပြစွာ ပြောတတ်သော သူတစ်ယောက်ဖို့အခွင့်ကောင်းယူပြီး မိန်းခလေးများရဲ့အသေရေ ဖျက်မူများနှင့်နိုင်ငံတော် သာသနာကို စော်ကားမူများကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်၊
အခုတော့ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်လိုက်သော အင်တာနက် ဥပဒေပုပ်မ နဲ့အတူ ရင်ဆိုင်ဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့....
တခြားသော Data အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ ရဲ ရဲ့Facebook Page မှာ သွားပြီး ဒီအပတ်အတွင်း message အနေဖြင့် တင်သွင်း သွားမယ် ဖြစ်ပါသည်.....။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:30 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပန်ကြားပါရစေ, သတင်း
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမည်
လုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍမှ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင်နိုင်ထွန်းက ပထမဦးစွာ ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအား ပုဂ္ဂလိကသို့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရာတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင် များကို တင်ဒါခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။ လေဆိပ်များအား ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍမှ အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုသူများကို အကြိုအရည်အချင်း စစ်ရာတွင် ဂျပန်ပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေး ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိမှု၊ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် သူများ၏ အရည်အချင်းနှင့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ သုံးစွဲမှု စသည်တို့ကို စစ်ဆေးသွားမည်ဟု ဦးတင်နိုင်ထွန်းက ရှင်းပြသည်။
နိုင်ငံတွင်းရှိ လေဆိပ်များအားလုံးကို ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍသို့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရာ၌ လေဆိပ်များ၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရေး၊ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိစေရေး၊ အများပြည်သူလူထုကို အကျိုးရှိစေရေး၊ နိုင်ငံတော်အတွက် ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေရေး စသည့် အချက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြောကြားသည်။
ကုမ္ပဏီများအား အကြိုအရည်အချင်း စစ်ဆေးခြင်း Prequalification ကို ယခုလ ၂၅ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်အထိ သတ်မှတ် ခေါ်ယူသွားမည် ဖြစ်ကာ Prequalification တင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်မှ ၂ဝ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်အတွင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တင်ဒါခေါ်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၃ မေလအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍသို့ လွှဲပြောင်းပေးကာ လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အား တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်လိုသည့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်၊ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များသည် လက်ရှိ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်များတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေသည့် အတွက် မေလကုန်သည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အပြီးလွှဲပြောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်က လေကြောင်းလုံခြုံရေး အတွက်ကိုသာ ပါဝင်ပတ်သက်မည် ဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂလိက၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းမျိုး မဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း ဦးတင်နိုင်ထွန်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီပိုင် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သော Pioneer Aerodrome ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေရာ ယင်းကုမ္ပဏီနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနတို့ ချုပ်ဆိုထားသော စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းကုမ္ပဏီကိုလည်း တင်ဒါ ခေါ်ယူရာတွင် တရားဝင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေမည်ဟု သိရှိရသည်။ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လေကြောင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပုဂ္ဂလိကအခန်းကဏ္ဍ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ပါဝင်စေကာမူ လုပ်ငန်းများအားလုံးကို နိုင်ငံတော်ကသာ တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ဥရောပလေကြောင်းလိုင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲပြီ
ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အချာကျသော ဖရန့်ဖတ်မြို့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့သို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ဂျာမနီနိုင်ငံ Condor လေကြောင်းလိုင်း တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမှု စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမှု ခရီးစဉ်ဖွင့်ပွဲကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၄ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာဒုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းလေကြောင်းလိုင်းမှ ခရီးသည် ၂၆၈ ဦးဆံ့ Boeing 767 300 ER လေယာဉ်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ စင်းလုံးပြည့် ပါဝင်သော ယင်းလေယာဉ်သည် ဖရန့်ဖတ်မြို့မှ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ ပျံသန်းပြီး ရန်ကုန်မှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်သို့ ခေတ္တဝင်ကာ ဖရန့်ဖတ်မြို့သို့ ဆက်လက်ပျံသန်းကြောင်း၊ ပျံသန်းချိန် ၁၀ နာရီကျော် ကြာကြောင်း သိရသည်။ “ပြည်ပကပျံတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေ တိုးလာတယ်။ ခရီးသည်အရေအတွက် တိုးလာတယ်။ တိုက်ကြီးတွေကို ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Condor လိုမျိုး လောလောဆယ် မရှိသေးဘူး” ဟု လေကြောင်းညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းဆွေထွန်းက ပြောသည်။
Condor လေကြောင်းလိုင်းသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၆-၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ပြေးဆွဲဖူးခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲခြင်း မဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်ခံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသို့ ပျံသန်းပြေးဆွဲနေသော ပြည်ပလေကြောင်းလိုင်း ၁၄ လိုင်းရှိရာမှ ယခုအခါ
စသည်တို့အပါအဝင် စုစုပေါင်း လေကြောင်းလိုင်းသစ် ခြောက်လိုင်း ထပ်မံတိုးလာကြောင်း ဦးဝင်းဆွေထွန်းက ပြောသည်။
Condor လေကြောင်းလိုင်း ခရီးစဉ်အတွက် ရန်ကုန်-ဖရန့်ဖတ် အသွားအပြန် လေယာဉ်လက်မှတ်မှာ Economy Class အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ထောင်အောက်ခန့် ဈေးနှုန်းရှိကြောင်း၊ လေယာဉ်အတွင်း Economy Class အပါအဝင် Premium Economy Class၊ Business Class ဟူ၍ သုံးမျိုးပါရှိကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် News Watch Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:30 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ကိုတိုးကြီး(ခ)ခင်မောင်တိုး ကျမ္မာရေးကောင်းလာပြီဖြစ်သဖြင့် ဖုန်းဆက် တရားထိုင်နိုင်ခြင်းတို့ ပြန်လည် ပြုလုပ်လာနိုင်
စင်ကာပူတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော တေးသံရှင် ခင်မောင်တိုး ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ မှာ ယခင် အခြေအနေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူတွင် ရောက်ရှိနေသော တေးသံရှင် ဂျေမောင်မောင် မှ ရန်ကုန်မှ မိတ်ဆွေ များဆီသို့ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ " စကား ပြောနိုင်ပြီ၊ ပုတီးတွေတောင် စိပ်နိုင်ပြီဟု" တေးသံရှင် ဂျေမောင်မောင်နှင့် ဖုန်းအဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့သော မိတ်ဆွေများထံမှ သိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 7:00 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မြိတ်မြို့ ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ထောက်ခံ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိပြီဖြစ်သဖြင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတော့မည်
အစိုးရ လုပ်သမျှ စီမံကိန်း တိုင်းကို တမင် ရွှဲ့ကာ ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဆန္ဒဖြင့် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ကုန်သော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်မဟုတ်သော သတင်းထောက်များ ဂျာနယ်များသွေးထိုးမှုကြောင့် ပြည်သူများမှာ အစိုးရလုပ်သမျှကို ဆန္ဒပြနေတော့သည် .။ သို့သော် ယခုအခါ မြိတ်မြို့တွင် ဆောက်လုပ်မည့် ကျောက်မီးသွး ဓါတ်အားပး စက်ရုံကို ရေရှည်မြင်သော ပြည်သူများက ထောက်ခံကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
မြိတ်မြို့ ကျောက်ဖျာကျေးရွာအုပ်စ လော့လော့ ကျေးရွာ တွင် တည်ဆောက်မည့် ကျောက်မီးသွေးလောင်စာသုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်မှုအား ကန့်ကွက် ဆန္ဒဖော်ထုတ် မှုများ
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး (၆) ရက်အကြာတွင် ထို ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံ တည်ဆောက်မှုကို ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ပြုလုပ်ရန် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရုံးထံ တင်ပြထားခြင်းအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည်ခြင်း အတွက် ခွင့်ပြုမိန့် (အမှတ်စဉ် - ၂/၂၀၁၂) ဖြင့် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် လူအင်အား (၂၅၀) ဦးဖြင့် (၁၀)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉၀၀) နာရီမှ (၀၉၃၀) နာရီ အချိန်ထိ မြိတ်မြို့ ပုလဲရတနာခန်းမမှ ကမ်းနားလမ်းအတိုင်း တြိဂံလမ်းဆုံ (ကန်ကြီးလမ်းဆုံ) အထိ စီတန်းလှည့်လည် ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
ထိုသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်း လှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်စုဝေးခြင်းကို ဦးမြင့်စိုး ၆/မအရနိုင်)-133382) ပါရမီ (၁) ရပ်ကွက်နှင့် ဦးစိုးနိုင် (၆/မအရ(နိုင်)083895)မြိတ်တောင်နယ်မြေတို့မှဦးဆောင်ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ရာတွင်အသုံးပြုမည့်ကြွေးကြော်သံနှင့်ပိုစတာ၊ဆိုင်းဘုတ် စာတမ်းများမှာ-
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး(ဒို့အရေး)၊
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အ၀ ရရှိရေး (ဒို့အရေး)၊
မြိတ်ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးရေး (ဒို့အရေး) ၊
အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံများ ပေါ်ထွန်းလာရေး(ဒို့အရေး)၊
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့နည်း ပပျောက်ရေး (ဒို့အရေး)၊
အလုပ်လက်မဲ့ ဦးရေ လျော့နည်း ပပျောက်ရေး (ဒို့အရေး)၊
ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်မှု အောင်မြင်ရေး (ဒို့အရေး)၊
ကျောက်မီးသွေး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်မှုကို (ကြိုဆို ပါသည်/ထောက်ခံပါသည်)
တို့ အသုံးပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည် ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:00 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပန်ကြားပါရစေ
နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာပါလို့ပြောပြီး ဘင်္ဂလီတွေ ပွါးများစွာပေါ်ထွက်လာခြင်း
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတစ်ဦး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်လာလျှောက်တာကို ကြုံဖူးတယ်လို့ အသိတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ပြီးခဲ့သောနှစ်က ထည့်ရေးဖူးပါတယ်။ တခြား ကျနော်တို့မသိတဲ့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိအုံးမလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ၂၈ က မြုပ်သွားတဲ့ ဘုတ်ပေါ်က လူတွေကိုပဲ ကြည့်လေ။ အများစုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေ။ လူမှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေက မြန်မာပြည်အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်စားနေကြတာ။
ဒီနေရာမှာ မျှတအောင် ပြောလိုက်ပါရစေ။ အမေရိကန်မှာ တရုတ်ပြည်က ပြည်ကြီးတရုတ်တွေ မြန်မာစကားတစ်ခွန်းမှ မပြောတတ်ပဲ မြန်မာpassport တွေနဲ့ လာလျှောက်တာကိုလည်း ကြားဖူးတယ်။ မြန်မာ passport ဘယ်လိုလုပ်ရသွားလဲ ဆိုတာကလည်း တစ်ပိုင်း တွေးစရာပေါ့။
တချို့ခေါ်တော ဘင်္ဂလီတွေက ပြောတယ်။ ဆော်ဒီမှာ ခေါ်တောဘင်္ဂလီတွေ ၅ သိန်းလောက် ရှိတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆော်ဒီကလည်း အနီးလေးတော့ မဟုတ်။ သွားမယ့် စရိတ်ကလည်း နည်းတာမဟုတ်။ ၅ သိန်းတောင် ရောက်သွားတယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကတော့ စာဖတ်သူတွေ စဉ်းစားကြ။ အဲဒီအထဲမှာရော အယောင်ဆောင်အတုတွေက ဘယ်နှစ်ယောက်များ ပါလိုက်မလဲနော်…။
အခုတော့ အချက်အလက် အထောက်အထားတွေက တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပေါ်ထွက်လို့ လာပါပြီ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်တဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Weekly Blitz က သူရဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က အခုလို ရေးပါတယ်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်လတွေအတောအတွင်းက အနောက်နိုင်ငံတွေဆီမှာ ခိုလှုံခွင့်တောင်းတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဦးရေဟာ အရမ်းများလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိလာတာက အဲဒီခိုလှုံခွင့်တောင်းတဲ့ လူတွေရဲ့ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ဟာ ရိုဟင်ဂျာအတုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။”
အခုလည်း ရိုဟင်ဂျာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား သုံးဦး ဂျာမနီမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လာလျှောက်တာကို ဖမ်းမိထားပါပြီ။ သုံးဦးစလုံးဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေပါ။ နာမည်တွေကတော့
၁။ အူဂျူ အူလာ (Uju Ullah)၊
၂။ ဂိုပါ (Gopar)၊
၃။ ဂါ ဘနူ (Gul Banu) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အူဂျူနှင့် ဂါ က မွတ်ဆလင်တွေပါ။ ဂိုပါ ကတော့ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တဲ့။ သုံးဦးစလုံးဟာ မြန်မာစကားရော၊ ခေါ်တောစကားပါ မပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကာ ခရိုင်နဲ့ ကင်မ်မီလာ ခရိုင်က လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေပါ။ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရဖို့အတွက် သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးတဲ့ ခေါ်တောဘင်္ဂလီတွေပါ ဆိုပြီး စာရွက်စာတမ်းအတုတွေနဲ့ လိမ်ကြပါတယ်။ လိမ်တာမရတော့ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ခေါ်တောတွေပါဆိုပြီး ဆက်လိမ်ကြပါတယ်။ အဲဒါလည်း ကျရှုံးပြီး အခုတော့ စာရွက်စာတမ်းအတုသုံးစွဲမှု၊ လိမ်လည်မှုတွေနဲ့ ဂျာမနီရဲ့ တရားစီရင်မှုကို နာခံကြရတော့မှာပါ။
Weekly Blitz ရဲ့ အဆိုအရ နှစ်နိုင်ငံအတွင်း (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ) မှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းတွေဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေဆီကို ၀င်ရောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေကို ရောင်းနေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ NGO တွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအခြေစိုက်အဖွဲ့တွေဆီက ထုတ်ပေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို အတုလုပ်ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာအဖြစ်နဲ့ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေရှိတယ်၊ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို Weekly Blitz က လက်ခံရရှိထားတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ အဲဒီစာရွက်စာတမ်းအတုတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ တာကာ ၂ သောင်း ကနေ ၂ သောင်းခွဲကြား (ကျပ်ငွေ ၂ သိန်းဝန်းကျင်) ဈေးပေါက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်အခြေစိုက် NGO တွေရဲ့ စာရွက်စာတမ်းအတုတွေကို လုပ်ပေးတဲ့ ပွဲစားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ကော့ဘဇား ခရိုင်အတွင်းမှာ ရှိကြပြီး လိုချင်ရင် ၁၀ နာရီ နဲ့ ၁၅ နာရီအတွင်း လုပ်ဆောင်ပေးကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေ၊ NGO တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့ တစ်ယောက်က လာပြောတာနဲ့ သတင်းလုပ် ရေးသားတာတွေ၊ သမိုင်းအတုတွေကို ဖြတ်ညှပ်ထည့်သွင်းနေတာတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေကို ဖောင်းပွရေးသားနေတာတွေဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာအစိုးရက တရားမ၀င်လူတွေကို စစ်ဆေးသင့်သလို နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ချင့်ချိန်ယုံဖို့၊ ခေါ်တောဘင်္ဂလီ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးဖို့ လိုနေကြပါပြီ။
ပြည်တွင်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေသိအောင် ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးကြစေလိုပါတယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 2:30 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ပန်ကြားပါရစေ, သုတကဏ္ဍ
သံရုံး ၉ ရုံးပေါင်းစည်းပြီး ရခိုင်အရေးအတွက် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
သြစတေးလျ + ပြင်သစ်+အီဂျစ်+ဂျာမဏီ+ဂျပန်+တူရကီ+အင်္ဂလန်+အမေရိကန်+ဆော်ဒီိအာရေဗျ သံရုံးများ စုပေါင်းပြီး ရခိုင်အရေးအတွက် အစိုးရအားထုတ်မှုကို ချီးကျူးပြီး နောင်ဤကဲ့သို့ မဖြစ်ပွါးစေရန် တိုက်တွန်းသည့် ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသည်။
Mr. Barack Obama နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
MJ - မင်္ဂလာပါ
OB - မင်္ဂလာပါ
MJ - လာမယ့် အာရှခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်လည်ပတ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
OB - ဟုတ်ပါတယ်။
MJ - မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ အမေရိကန်သမ္မတ တစ်ဦး ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်ပေါ့နော်။
OB - တရားဝင်အရဆိုရင်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။
MJ - ဟင်... ဒါဆို တရားမဝင်တွေရှိသေးတယ်ပေါ့..
OB - ဒါက ဒီလိုရှိတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ၃ လလောက်အလိုတုန်းကဆို မက်ရွန်နေ နဲ့က မဲအခြေအနေက သူမသာ၊ ကိုယ်မသာပဲ။ အဲဒီတော့ အကြံထုတ်ရတာပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ အပြတ်အသတ်နိုင်ဖူးတဲ့ သူတွေဆီက နည်းနာနိဿယတွေ စုံစမ်းရတာပေါ့။ အရမ်းခင်တဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း ကျပြန်တော့ သူ့ပါတီတောင် မဲမလောက်လို့ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ထားရတာ။ ပူတင်က ကျန်တဲ့ပါတီတွေကို နှိပ်ကွပ်ခိုင်းတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ အဲဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ ဟူကျင်တောင် ကျပြန်တော့ ကျန်ပါတီတွေကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကိုယ့်တစ်ပါတီထဲ မဲပုံးထောင်တဲ့။ ပိုဆိုးပဲ။ မြန်မာပြည်ကို ဟီလာရီကလင်တန် လွှတ်လိုက်တုန်းက ဦးသိန်းစိန်က ဆုတောင်းပြည့်ချင်ရင် ကြီးကိုးကြီး အဓိဌာန်ဝင်ဖို့အကြံပေးလိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် ဆိုတဲ့အတိုင်း အဲဒါကို စမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်လေး ဘာလေး စုံစမ်းရသေးတာပေါ့နော်။ Google CEO အဲရစ်ရှမစ်ကတော့ သူတောင် တိတ်တိတ်လေး မြန်မာပြည်သွားပြီး ကြီးကိုးကြီး အဓိဌာန် ဝင်ခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတယ်။ Oracle က Google ကိုတရားစွဲထားတုန်းကပေါ့။ အဲဒါ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားတယ်လေ။ သူတောင် မြန်မာပြည်က နံနက်စာ ကောက်ညှင်းပေါင်းကိုကြိုက်လို့ Android 6.0 ထွက်ရင် Codename ကို "ကောက်ညှင်းပေါင်း" လို့ နာမည်ပေးမယ် ပြောသေးတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ကို တိတ်တိတ်လေး ရောက်ခဲ့သေးတယ်။
MJ - အဲဒီတုန်းကရော လာရတာ အဆင်ပြေရဲ့လား။ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေရော ရှိလား။
OB - အဲဒီကို မသွားခင်ကတည်းက မြန်မာစာတတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို ခေါ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ စာတွေကို မြန်မာလိုရေးခိုင်းထားတယ်လေ။ ဥပမာ - "ကျနော့်ကို ရွှေတိဂုံဘုရားကို လိုက်ပို့ပေးပါ" အဲဒီလို စာတန်းလေးရေးပြီး ကိုယ်ကတော့ အောက်က အင်္ဂလိပ်လို အတိုကောက်မှတ်ထားရတာပေါ့နော်။ ဘယ်စာရွက်က ဘာဆိုတာ။ အဲဒီရောက်တော့ သွားချင်တဲ့နေရာကို တက္ကစီကို အဲဒီစာလေးပြပြီး လိုက်ပို့ခိုင်းရတာပေါ့။
MJ - ပြဿနာတွေဘာတွေ ကြုံရသေးလား။
OB - မြို့တော်ခန်းမနားမှာတုန်းက လမ်းဖြတ်ကူးတာ အဖမ်းခံရသေးတယ်။
MJ - အဲဒီတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။
OB - ဘယ်လိုမှ မဖြစ်ပါဘူး။ မလာခင်က မြန်မာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာပေါ့။ "အစ်ကိုကြီး" လို့ ခေါ်ပြီး သူ့အနားကပ်၊ လက်ထဲကို မြန်မာငွေ ၅၀၀၀ တန် လိပ်ထားတာလေး ထိုးထည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားရောပဲ။
MJ - အဲဒီလို လာတုန်းက အိမ်ဖြူတော်မှာ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားခဲ့လဲ။
OB - တိတ်တိတ်လေး လာတာဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲ ခေါ်မလာဘူး။ အနည်းအကျဉ်းလောက်ပဲသိတာလေ။ လူအစားကိုတော့ အင်တာနက်မှာ အိုဘားမား ဂဏန်းစတိုင် ကတဲ့ကောင်ကို သိတယ်မဟုတ်လား။ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်လေ။ သူ့ကို ခဏနေခိုင်းရတာပေါ့။
MJ - အဲဒီတော့ အဓိဌာန်က ပြီးသွားတယ်ဆိုပါတော့။ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တာကို အဲဒါကြောင့်လို့ယူဆလား။
OB - ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတရွေးချယ်ရေး မဲအရေအတွက်ကို ကြည့်လိုက်လေ။ ကျနော်က ၃၃၂ မဲ၊ မက်ရွန်နေက ၂၀၆ မဲ၊ ကွာခြားချက်က ၁၂၆ မဲ။ ၁+၂+၆ = ၉။ ၁၂၆ ကို ၉ နဲ့စားရင်ပြတ်တယ်လေ။ အဲဒါ ကိုးနဝင်းပဲပေါ့။ အဲဒါအဓိဌာန်ကြောင့်ပေါ့။ ဒီလောက်ရှင်းလင်းနေတာ။ အဲဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို အလည်လာ ဘုရားလည်းထပ်ဖူးရင်း ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း လက်ဆောင်လေး ဘာလေး ပေးရတာပေါ့ဗျာ။
MJ - သြော်.. ဒါဆို အဲဒီအကြောင်းရော တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဖြစ်သေးလား။
OB - အင်း.. ပြောဖြစ်တယ်ဗျ။ Apple CEO တင်ကွတ်ကတောင် သူလည်း ကြီးကိုးကြီး လာဦးမယ်ပြောတယ်။ စတိဗ်ဂျော့ ရှိတုန်းက ဖုန်းအသစ်မကြေငြာခင်တိုင်း ကြီးကိုးကြီး အဓိဌာန်ဝင်လေ့ရှိတယ်တဲ့။ တင်ကွတ်က သူကျ မလုပ်ဖြစ်တော့။ အခု Apple Map ကလည်း သိပ်အဆင်မပြေ၊ Samsung ကလည်း တရားတွေဆွဲဆိုတာ့ သူလည်း အဓိဌာန်ဝင်မယ်ပြောတာပဲ။
MJ - မြန်မာပြည်ရောက်တုန်း ဘာတွေလုပ်မယ် စဉ်းစားထားလဲ။
OB - အိုင်တီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မယ်။ မင်းလမ်းက ရခိုင်မုန့်တီသောက်မယ်။ တရုတ်တန်းက ဝက်သားပေါင်းစားမယ်။ YKKO ကြေးအိုးသောက်မယ်။ ဟိုတစ်ခေါက်လာတုန်းက စားလိုက်ရတာ အားမရဘူး။
MJ - ဟုတ်ကဲ့.. အခုလိုဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
OB - ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပြောသမျှအကုန်ကို တခြားသူတွေကို လျှောက်မပြောနဲ့ဦးနော်..
MJ - ဟုတ်ကဲ့ လျှောက်မပြောပါဘူး။ ရေးပြီးမှပဲ အင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်မှာပါ...
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 1:00 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post